အမျိုးစောင့် ဥပဒေ ဆိုတာ ကို ဒီ လို ထပ် ဖြည့်ကြည့် ရင် မကောင်း ဘူး လား။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အမျိုးစောင့် ဥပဒေ ဆိုတာ ကို ဒီ လို ထပ် ဖြည့်ကြည့် ရင် မကောင်း ဘူး လား။
Posted by မိုချို on Jun 18, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Think Different | 39 comments
ဒီရက် ပိုင်း အတွင်း မဟာ ဖေ့ ဘွတ် တော် ကြီး မှာ ကျွတ်ကျွတ် ညံ နေတဲ့ အမျိုးစောင့် ဥပဒေ ဆိုတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခု ကို စိတ်ထဲ အီလည်လည် ဖြစ် မိလို့ ရွာထဲ ချ ရေး လိုက် ရ ပါ တယ်။ မှော် ဘီ သံဃာ့ အစည်း အဝေး မှာ သဘော တူတယ် ဆိုလား ၊ မတူ ဘူး ဆိုလား ၊ ဧရာ ၀တီ လိမ် တယ် ဆိုလား ၊ ဖ တ် ရင်း နဲ့ ကို မူးနေတာ ပဲ။ ကိုယ်က ပဲ စာဖတ် ရှမ်း လေ သလား မသိ ၊ သံဃာ့ အစည်း အဝေး က သဘောတူ ညီ ချက် ဆိုတဲ့ အထဲ မှာ ၉၆၉ ဆိုတဲ့ စကား လုံး ကို သာသနာ ညှိုး နွမ်း စေတဲ့ နေရာ မှာ မသုံး ရဘူး လို့ တွေ့ လိုက် မိပေမယ့် အမျိုးစောင့် ဥပဒေ ဆိုတာ မတွေ့ လိုက် မိ သလို ပဲ။ ထား ပါတော့ လေ…. ပြောချင်တာ က အိမ် ထောင် သား မွေးဥပဒေ ကို ရေး တဲ့ သူ တွေက အိမ်ထောင် သားမွေး ကိစ္စ နဲ့ လုံးလုံး မအပ်စပ် တဲ့ ဘုန်း ကြီး အချို့ ဖြစ်နေ တာ က ကြား ရတာ နားဝ မချမ်း မသာ ဖြစ် နေရ တယ်။
အဲဒါ ကို အစ ဆွဲ ထုတ် တဲ့ သူတွေ က ဆွဲ ထုတ် ၊ ထောက်ခံတဲ့ သူတွေ က အကြီး အကျယ် ထောက်ခံလို့ ။ တွေ့ ရ သလောက်တော့ ထောက်ခံ တဲ့ သူ အများစု က ပုရိသ တွေ များ နေတယ်။ ထောက်ခံ မှာပေါ့ သူတို့ကတော့ ကင်း လွတ် ခွင့် ရ တာ ကိုး။ ဘာ တဲ့…… ပေ့ခ်ျ တစ်ခု မှာ ဖတ်လိုက် ရတာ ဘာသာ ခြား နဲ့ လက် ထပ်တဲ့ မိန်း ကလေး ၆၀ ရာ နှုန်း တောင် ရှိနေပြီ ဆိုပဲ။ တကယ် သာ အဲလောက် ရှိ ရင် မြန် မာပြည် တော်တော် အခြေနေ ဆိုး နေပြီ ပဲ။ ဒီလို ဥ ပဒေ ပြ ဌာန်း ရုံ နဲ့ မရ တော့ ဘူး နော။ ဘာနဲ့ တူလဲဆိုတော့ ကင်ဆာနဲ့ သေခါနီး လူ မာ ကို ကွမ်း ရွက် ပြုတ် ရည် လေး သောက် လိုက် ပါ အုံး ဆို သလို ဖြစ်နေပြီ။ ဆို လို တာက မိန်း ကလေး ၁၀ ယောက်မှာ ၆ ယောက်လောက် ဘာသာခြား နဲ့ လက် ထပ်နေတယ် ဆို ရင် နိုင် ငံတော် အဆင့် အရေး ပေါ် အခြေ အနေ သတ်မှတ် ရ တော့ မှာပေါ့။
ဥပဒေ ပြ ဌာန်း လိုက် ရုံ နဲ့ လိုက် နာ ကြ ပြီ တဲ့ လား ။ မြန်မာ ပြည် မှာ ရှိ ပြီး သား ဥ ပဒေ တွေ ကိုတောင် တိတိ ကျကျ လိုက်နာ ကြ လို့ လား ။ မြန်မာ ပြည်က ဥပဒေ ဆိုတာတွေ ကလည်း သားရေ ကွင်း အလား ( ကိုရင် ရာမည ရဲ့ သားရေကွင်း မဟုတ်) လို တစ်မျိုး၊ မလို တစ်မျိုး အမျိုးမျိုး ကျုံ့ နိုင် ဆန့် နိုင် ဆို တော့ အဲဒီ ဥ ပဒေ များ ပြ ဌာန်း ပြီး သွား ရင် ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံ ချက် တစ် စောင် ဘယ် နှစ် ပုန်း ပေါက်ဈေး ရှိတယ် ဆိုပြီး ကိုင် ရတဲ့ သူတွေ တော့ ထော ကြော ပဲ။
ဆိုတော့….. အစွမ်း ကုန် သဘော တူ နေကြ တဲ့မဟာပုရိ သ တို့ အတွက် လည်း ညီတူ ညီ မျှ ဖြစ်သွားအောင် ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဆိုတာ သက်သေ ပြနိုင် ဖို့ အတွက် သတို့ သားလောင်း တွေ လက်ထပ် စာချုပ် မှာ လက် မှတ် မထိုး ခင် ကျမ်း ကျိ်မ် ရင်း တဆက်တည်း ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် အလွက် ရွက် ပြ ခိုင်း ၊ အ၀ိဇ္ဇာ နဲ့ တဏှာ ကြောင့် ခန္ဓာ ၅ ပါး ဖြစ် ရ ပုံ ၊ သစ္စာလေး ပါး ကို ဘယ်ဟာ က ပယ်ရမယ် ဘယ် ဟာ က ဆိုက် အောင် ကျင့် ရ မယ် ဆိုတဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အကျဉ်း လေး ရှင်း ခိုင်း ပြီး မှ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ၀င် စင်စစ် ဖြစ်ကြောင်း အသိ အမှတ် ပြု ပြီး လက်ထပ်ခွင့် ပေး ဖို့ ဥပဒေ မှာ ထပ်မံ ဖြည့် စွတ် ချင် ပါတယ်။
ဒီလို ဆို ပြန်တော့ နောက် ထပ် အရေး ကြီး တဲ့ တစ်ချက် ထပ် ထည့် ချင် သေး ရဲ့။ တချို့ ဘုန်းဘုန်း တွေ ၀ါ တော်တော် ရပြီး မှ ကိလေသာ အပူတော ကို ခုန်ဆင်း ကြတာ ကြုံ ဖူး ရဲ့ ။အရင် က ကြား ရုံ ပဲ ကြား ဖူး ပြီး ခု နောက် ပိုင်း ၂ ဦး တွေ့ ဖူး သွား ပြီ။ ၀န်ထမ်း လုပ်တုန်း က ကြုံ ခဲ့ ဖူး တဲ့ အမျိုး သမီး တစ်ဦး မကြာ ခဏ သီလရှင် ၀တ်လိုက်၊ တရား စခန်း ၀င် လိုက် နဲ့ သဒ္ဒါ လွန်၊ တဏှာ ကျွံ ပြီး သကာလ အဆုံး မတော့ တရား ပြတဲ့ ကိုယ်တော် ပါ အိမ် အပါ ခေါ် လာခဲ့ တယ်။ ငယ်ဖြူ ကိုယ်တော် လူ ထွက် ခမျာ ဘာမှ မလုပ်တတ် မကိုင်တတ် နဲ့ သား ကြွေး မှု မယားကျွေး မှု ကြုံ လာတော့ ဆံ ပင် ညှပ် ဆရာ ဖြစ် ရ ပါလေရော။ ( မယုံ ရင် ကျမ လုပ်ခဲ့ တဲ့ ရုံး မှာ စုံစမ်း နိုင် ပါ တယ်၊ အရင် ပိုစ့် မှာလည်း အဲဒီ ရုံးက အမျိုး သမီး တစ်ယောက် ဘာ သာပြောင်း ရ တဲ့ အကြောင်း ရေး ဖူး တယ်။)
နောက် တစ်ဦး ကတော့ ဒီ တစ်ခေါက် ရန်ကုန်ပြန်ရင်း သိခဲ့ ရ တာ ပဲ။ ယောက်ျား ဘက်က ကြီးတော် အပျို ကြီး တစ်ယောက် စာသင်သား ဦးဇင်း တစ်ပါး ကို ငယ်ငယ် ကိုရင် လေး ဘ၀ တည်း က ပစ္စည်း လေး ပါး ထောက်ပံ့ ၊ အရွယ်ရောက်တော့ ရဟန်းအမ ခံ လို့ နောက်ဆုံး ဝေဘာဂီ ဆေး ရုံ နား မှာ ကျောင်း ပါ ဆောက်ပြီး လှူ ခဲ့ တယ်။ တစ် ဆွေလုံး တစ်မျိုး လုံး မြေကြီး သယ်၊ မဆလာ ရွက် လို့ လုပ်အား အလှူ ပါ ထည့် လို့ ပျော်ပျော် ပါးပါး ကြီး လှူ ကြတယ်ပေါ့။ ကြီးတော် ကြီး လည်း အမေဒစ်ကား မှာ ဆူရှီ လိပ်လို့ ရ သမျှ ( ကျန်တဲ့ တူ၊ တူ မတွေ တော့ မသိ၊ ကိုယ်တွေ တော့ ၅ပြား တစ်စေ့ တောင် မရ ဖူးဘူး ) သူ့ ဦးဇင်းလေး လို သမျှ ဖြည့် ဆည်း ပေး ခဲ့ တယ်။ ဒီတခေါက် ကြီး တော် ကြီး ရောက် နေတာ နဲ့ ကြုံ တော့ သူ့ ဦးဇင်းလေး ဘာ ဘွဲ့ တွေ ရပြီ လည်း စကား စပ်မိတော့ မှ ကြီးတော်ကြီး လှူ ထားတဲ့ ထဲက ရွေ့ပြောင်း နိုင်တဲ့ ပစ္စည်း တွေ မ ပြီး အိမ်ယာ ထူတောင် ပြီး လို့ သားသမီးတွေ တောင် ပွား စီး နေပါ သတဲ့။ ကြီးတော် ကြီး မှာ ရှက်လည်း ရှက် ၊ ယူကြုံး မရ အပူ လုံး ကြွ လို့ အိပ်ရာ ထဲ တောင် လဲ ရတာ ခု မှ နလံ ထ တယ် ဆိုပဲ။
ဒီတော့ ယူ စရာ ယောက်ျား အတော် ရှား လို့ ဘုန်း ဘုန်း တွေ ကို မှ ဖျာရောင်း တဲ့ သကောင့် သမီး တွေ ကို သာသနာ ဖျက် မတွေ အနေနဲ့ ပြင်း ပြင်းထန် ထန် အရေးယူအပြစ် ပေး သင့် ကြောင်း ၊ ဘယ် လို အပြစ် လဲ ဆိုရင် ရာသက်ပန် သတ်သတ်လွတ်စား ခိုင်း ၊ ဥပမာ .ငှက်ပျော သီး ၊ ခရမ်း သီး ၊ မုန်လာဥ၊ ပြောင်း ဖူး၊ ကြက်ဟင်း ခါး သီး တွေ ပဲ စား ရ မယ် ။
အလှူ ရှင်တွေ ရဲ့ ယုံ ကြည် မှု ကို အလွဲ သုံး စား လုပ်လို့ မာတုကာမ တွေ ဖျာရောင်း တဲ့ နောက် လိုက် လို့ လူထွတ် တဲ့ ဘုန်းဘုန်း တွေ ကို တော့ ကုန်းကုန်း တွေ လုပ် ပစ် ။ ဒီ လို ဆို ဥပဒေ ပို ပြည့် စုံ သွား မယ် လို့ ထင်မိတယ်။
ဒီ အချက် တင် မက ပါဘူး ဖေ့ ဘွက် ၀င် ဖတ်လိုက် တိုင်း အကုသိုလ် တွေ ဖြစ်ရ ပြီး ပြောချင်တာတွေ တန်း စီ နေပေမယ့် ပြော ပြန်ရင်လည်း ကြိမ်းသေပေါက် ကုလား မယား လို့ ပြော ခံ ရ မှာသေချာနေတယ်။ အဲ တော့ အိမ် က လူကြီး ငယ်ထိပ် ကြိမ်း မယ့် အရေး တွေး လို့ ( ခေါင်း ပေါ် က ငယ် ထိပ် ) ဒီလောက် နဲ့ ပဲ ရပ် ပါ တော့ မယ်။ ရေး ခဲ့ တဲ့ အကြောင်း အရာ ၂ ရပ် က အမှန် များ ဖြစ် လို့ အတော် တော့ လက် ခံ ရ ခက် ပါ လိမ့် မယ် ။
ဆိုတော့ ….. အခု အတည် ရေး ပါမည်။ ကိုယ် တိုင် အတွေ့ အကြုံ များ ဖြစ် သည့် အတွက် ကိုယ် ရည် သွေး များ ပါနေခဲ့ ရင် လို အပ် လို့ ထည့် ရေး ရတဲ့ အတွက် သည်း ခံ ဖတ်ရှု ကြ ပါ ကုန်။
ကျမ ၁၀တန်း အောင်တော့ ၀ိဇ္ဇာ ၊ သိပ္ပံ နှစ်ခု စပေါင်း တဲ့ နှစ် ၅ဘာသာ( တကယ်ကဟို မရောက် ဒီ မရောက် ၉ ဘာသာ) ဖြေ ရ တဲ့ ထဲ မှာ အင်္ဂလိပ် စာ က လွဲ လို့ ဂုဏ်ထူး ၄ ခု ပါတယ်။ မြန်မာစာ အပါဝင် မြန်မာ လိုရေး ထားတဲ့ ဘာသာတွေကို ကျူရှင် မတတ်၊ အလွတ် မကျက် ပဲ ပုံနှိပ် စာအုပ် နဲ့ ၊ သူငယ်ချင်းတွေ ဆီက အထူးထုတ်တွေ ငှား ပြီး (ကိုယ်တိုင် မ၀ယ် နိုင်လို့ ) နား လည်အောင် သေချာ ဖတ် ၊ မှတ်သင့် တာ မှတ် ၊ ကျက် ဖို့ လို အပ်တာ ကို မှ ကျက် ပြီး သက်သက်သာသာ ပဲ ဂုဏ် ထူး တွေ ရခဲ့ တယ်။ အဓိက က ငယ်ငယ် ထဲက စာဖတ် ၀ါ သနာ ပါခဲ့တဲ့ အကျိုး ပါ ။ စာ စဖတ် တတ် စ ထဲက တွေ့ သမျှ စာတွေ မလွတ်တန်း ဖတ်လေ့ ရှိတယ်။ တော မှာ နေ ခဲ့ တဲ့ ငယ် ဘ၀ တလျောက် မိဘတွေ ၀ယ် ပေး တဲ့ စာအုပ် မျိုး စုံ နဲ့ မွေ့လျော် ခဲ့ တယ်။ ၃ တန်း နှစ် မှာ မိုးမိုးအင်း ယား ရဲ့ညီမလေးက အချစ်ကို ကိုး ကွယ် သတဲ့ လား ၊ ဆရာ မြ သန်း တင့် ရဲ့ ဓားတောင် ကို ကျော် ၍ မီးပင်လယ်ကို ဖြတ် မည် စတဲ့ ၀တ္ထုတွေ က အစ ဆရာဝန် တင် ရွှေ ရဲ့ ညာဏ်စမ်း ပဟေဠိ ၊ ဦးကြီး ပု ရဲ့ ချက်နည်း ပြုတ် နည်း အလယ်၊ ဓမ္မပဒ အတွဲ လိုက် နဲ့ ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် ဖြစ်ပေါ် လာပုံ နဲ့ အကျိုး ကျေး ဇူး စတဲ့ ဘာသာရေး နဲ့ ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေ အဆုံး စာ ပေါင်း စုံ အောင် ဖတ်တတ်နေပြီ။ ၄ တန်း နှစ် ရန်ကုန် မှာ ကျောင်း လာ တတ်တော့ အဖိုး စာအုပ်စင် က စွယ်စုံ ကျမ်း စီးရီး လိုက် ကို အကြိုက်တွေ့ ခဲ့ ရတယ်။ နောက်ပြီး မိဘ ၊ အထူး သဖြင့် အဖေ ရဲ့ သွန်သင် မှုက အတင်း အကြပ် ပုံ သွင်း တာ မျိုး မဟုတ် ပဲ ၊ လုပ် သင့် တာ မလုပ် သင့် တာ တွေ ကို နား လည် အောင် ရှင်း ပြပြီး အဲ ဒီ အရွယ်ထဲ က ကိုယ် တိုင် စဉ်းစား ဆုံး ဖြတ်တတ်အောင် လေ့ ကျင့် ပညာ ပေး ခဲ့ တယ်။ အကျိုး ဆက် က အရာရာ ကို တွေး တော ဆင် ခြင် ပိုင်း ခြား တတ် သလို ၊ ပေါ့ပေါ့ နေ ပေါ့ ပေါ့ စား မဖြစ်တော့ ဘူး။ ဖခင် ကွယ်လွန် သွား ပြီး ဆယ်ကျော် သက် အရွယ် မှာ ရွယ် တူ တွေ ထက် စာရင် ပို ရင့် ကျက် ခဲ့ တယ်။ အရာရာ ကို သတိ နဲ့ ကြည့် တတ် တယ်၊ လူကဲ ခတ် တတ် တယ်၊ အရိပ် သုံး ပါး နား လည် တယ်။ သစ်ရွက် လှုပ် တာ လည်း မရီ ခဲ့ သလို လက်ဖက် ရည် ဆိုင် ရှေ့ ဖြတ် လျှောက် လို့ လည်း ခြေ လှမ်း မမှား ခဲ့ ဘူး။
ဆို ခဲ့ သလို ဂုဏ်ထူး တွေ အများ ကြီး နဲ့ အောင်ပြီး ပြီ ဆို တော့ မုဆိုး မ အမေရဲ့လုပ်စာ က မတ်တပ် စာ အပြင် ၊ တုံး လုံး စာ မရှိ ၊ အ၀တ် အစား ဆို တာ အဒေါ် တွေ စွန့် ကြဲ တဲ့ အကျ တွေ က လွဲ ရင် နတ္ထိ၊ ပိုဆိုး တာက ဘယ် တက္ကသိုယ် ကြီး ပဲ ၀င်ဝင် အမေ ထား ပေး နိုင်မှာ မဟုတ် တာ သေချာ နေတဲ့ အတွက် အဲ ဒီ အချိန် မှာ ခေတ် စား ကာစ study guide အလုပ် ကို လုပ် ရ တယ် ။ ကိုယ် လုပ်မိတဲ့ အလုပ် တစ်ခု မှာ နေရာ တစ်ခု သို့ မဟုတ် နာမည် တစ်ခု ကျန်အောင် လုပ်တတ်တာက ကျမ အကျင့် ၊ ဒီတော့ အသင်အပြ ကောင်း၊ ဆက်ဆံ ရေးကောင်း ၊ တပည့် တွေ ကို စည်း ရုံး နိုင် ပြီး အောင်ချက်ကောင်းစေ တဲ့ ဆရာမ ချောချော လေး လည်း နာမည်ကြီး လို့ လက်ဖျား ငွေသီး လာပြီ ပေါ့ ။
ဘာကြောင့် ကိုယ် ရည် တွေ သွေး နေ ရ သလဲ လို့ အတွေး မပွား ပဲ ဆက် ဖတ် စေချင် ပါတယ်။ study guide အလုပ် ဆို တာ ကိုယ့် ကို ကိုယ် ကြော် ညာ လို့ မရ ဘဲ တစ်ယောက် ကနေ တစ်ယောက် လက်ဆင့် ကမ်း လို့ သတင်း မွှေး စေ ပြီး မှ တပည့် တွေ ဆက်ရတဲ့ အလုပ် မျိုး ။ အဲ ဒီ မှာ မူ ဆလင် တပည့် လေး တစ်ယောက် က စလိုက်တာ နှစ်စဉ် ကျမ ရဲ့ တပည့် တစ်ဝတ် လောက်က မူ ဆလင် တွေ ချည်း ဖြစ်နေတယ်။ မဆလာစက် ၊ ကန်တော် လေး တကြော မှာ ၊ စာသွားသင် ရတဲ့ အိမ်တွေ ဆိုတာ တစ်အိမ် တတ် တစ်အိမ် ဆင်း လို့ ခြေရာ ချင်း ထပ်အောင် သွား ခဲ့ ဖူး ပါတယ်။ ချောချော လှလှ ၊ ထက်ထက်မြတ်မြတ် ဆရာမလေး ကို သဘော ကျ ကြ တဲ့ မိ ဘ တချို့ က သိသိ သာသာ တစ်မျိုး၊ မသိ မသာ တဖုံ စကား ဆို ကြတယ် ။
ဆရာ မလေး ကို လေ ….ဘာသာ သာ တူ ရင် ကျမ သား အကြီးကောင် အတွက် ဆရာမလေး မိဘတွေ ဆီမှာလာတောင်း တယ် သိလား ဆို တာက တစ်မျိုး၊
တီချယ် ရေ …တီချယ့် ကို သမီး ဦးလေး က အရမ်း သဘော ကျနေတာ ၊ သူက ဘယ် မိန်း ကလေး ကို မှ တော် ရုံ စိတ် ၀င်စား တာ မဟုတ် ဘူး၊ တီချယ့် ကို ကျ မှ အရမ်း ကြွေနေတာ၊ ဘာသာ မတူ လို့ ဖွင့် မပြော ရဲ ဘူး တဲ့ ဆို တာ က တနည်း ၊
ဆရာမရေ …ဆရာမ တပည့် ကတော့ ဆရာမ စကား ပဲ နား ထောင်တာ ၊ ဆရာမ ဆီ မှာ ပဲ တသက်လုံး အတွက် အပ် ချင် တာ၊ ကျ မ တို့ ချမ်း သာ သမျှ ကလည်း သူ့ အတွက် ချည်း ပဲ ဆို တာ က တစ်ဖုံ
သို့ ကလို အပြော တွေ ကို ပြုံး ပြုံး လေး နဲ့ မသိယောင် ဆောင် ကျော် ဖြတ် လို့ ၊ မိတ်လည်း မပျက် စေ ရပဲ ကိုယ့် ကိုယ် ကို မယိမ်း မယိုင် ထိန်း သိမ်း နိုင်ခဲ့ တယ်။
ဒီ နေ ရာ မှာမိန်း ကလေး တစ် ဦး တည်း သွား လာ ရ တဲ့ အတွက် ကိုယ့် အန္တရယ် ကိုယ် ကာ ကွယ် ဖို့ အသိဥာဏ် လက် နတ် အပြင် လက် နဲ့ ခလုတ် တွန်း ဖွင့် ရ တဲ့ ဓား လေး တစ်လက် ကလည်း ကိုယ် နဲ့ မကွာ အိတ် ထဲ အမြဲ ပါနေတတ် တာတော့ ဘယ်သူ မှ မသိဘူး ပေါ့ ။
တကယ့် တကယ် ရင် ခုန် ဘက် ကို ကျောင်းတော် ကြီး မှာတွေ့ တော့ ရုပ်ဆိုးဆိုး ၊ ဘိုင်ကျကျ ဒီလူ နဲ့ စကား ပြော ကြည့် တာ နဲ့ ဒီလူ ဟာ အမှီ အခို မရှိပေ မယ့် ကိုယ့် ဘ၀ ကို တိုးတတ်အောင် ကြီုးစား နိုင်တဲ့ သူ ၊ ကိုယ့် ကို မေတ္တာ စစ် နဲ့ အရူး အမူး ချစ် မဲ့ သူ လို့ ခွဲခြား သုံး သပ် နိုင် ခဲ့ တဲ့ အတွက် ချစ်ခွင့် ပန်သူ အများ ကြီး ထဲ က မှ ရွေး ခြယ် ခဲ့ တယ်။ အဖြေ မပေး ခင် နောက် ဆုံး ဗျူး ခဲ့ တဲ့ မေး ခွန်း က ချင်းတိုင်း ရင်း သား ရုပ် ပေါက် နေတဲ့ သူ့ ကို ဘယ် ဘာသာ ကိုး ကွယ် ပါ သလဲ ဆို တဲ့ မေး ခွန်း ပါ ပဲ။ ကျတော် ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဘာသာ ပါ ဆိုတော့ မေတ္တ သုတ် ရ သလား လို့ မေး ပြီး ရွတ်ပြ နိုင်မှ မီး စိမ်း ပြ ပြီး ခေါင်း ညှိမ့် ခဲ့ တဲ့ သူပါ။ ( တွေ့ ဖူး သမျှ ချင်း မလေး တွေ က ချော သလောက်၊ ချင်း ကောင်လေးတွေ က ဂင်တိုတို မျက် နှာပေါက် ကြမ်း ကြမ်း နဲ့ ရုပ် ဆိုး တတ် ကြတယ်။)
ချုပ်ရရင် မိန်း ကလေး တွေ ဘာသာခြားနဲ့ လက် မထပ် ရေး ဆို တာ ဥပဒေ ထက် ပို ခိုင် မာ တဲ့ ကိုယ် ပိုင် အသိဥာဏ် နဲ့ ထိန်း သိမ်း တာ ပို ဆီ လျော် ပါမယ်။ ဒီလို အသိ ညာဏ် တွေ ရှိ လာ ဖို့ငယ် စဉ် ထဲ က မိဘ တွေ က နည်း မှန် လမ်း မှန် နဲ့ ပညာ ပေး ပျိုး ထောင် ပေး ရ မယ်။ မိန်း က လေး မှ မဟုတ် ယောက်ျား လေးတွေ ရော ပါပဲ၊ လောက ကြီး ကို အမြင် ကျယ်ကျယ် ကြည့် ဖို့ ၊ မှန်မှန် ကန် ကန် သုံး သပ် တတ် ဖို့ ကြီုး စား သင့် ပါ တယ် ။ နိမ့် ကျ နေ တဲ့ ပညာရေး စနစ် ကို မြှင့် တင် ပေး နိုင်ရင်ဖြင့် ဖြန့် ကျက် တွေး တော နိုင် စွမ်း တွေ ၊ လူ ရည် လူ သွေး တွေ တိုး တတ် လာ နိုင် ပြီး အမှား အမှန် ကိုယ် တိုင် ခွဲ ခြား နိုင် လာတဲ့ အခါ စိတ်ဓါတ် ပျော့ ညံ့ လို့ ၊ သူ များ ဆွယ် လို့ ဘာသာ တရား တစ်ခု ကနေ တစ်ခု ကို အလွယ် တကူ ကူးပြောင်း သွား တာ မျိုး မရှိ နိုင် တော့ သလို ၊ တိုင်း ပြည် စီး ပွား ရေး တွေ တိုးတတ် လို့ စားဝတ် နေ မှု တွေ ချောင်လည် လာရင်လည်း ဆင်း ရဲ လို့ ၊ ခို ကိုး ရာမဲ့ လို့ ဘာသာ ကူးပြောင်း တာ တွေ နည်း သွား ပါလိမ့် မယ်။ ( ဒါ ပေ မယ့် ဒိဋ္ဌိ ကွာအောင် မဖယ် နိုင် သရွေ့ အချိန် မရွေး ဘာသာ ခြား ဖြစ် သွား နိုင် လို့ မြတ် စွာ ဘုရား ဟော ခဲ့ တဲ့ တရား တွေ မှာ ပါတဲ့ အတွက်) ပုထုဇဉ် လူ တစ်ယောက် ဟာ သူ့ ယုံ ကြည် မှု နဲ့ သူ ပြောင်း သွား ရင်တော့ ဘုရား ဟော ခဲ့ တဲ့ အတိုင်း ဖြစ်လို့ လက် ခံ ပေးရ မှာ ပါပဲ။ ဒီတော့ သုည နား ကပ်နေတဲ့ တိုင်း ပြည် ရဲ့ ပညာ ရေး လယ်ဗယ် နဲ့ ခြွတ်ခြုံ ကျ နေတဲ့ စီး ပွား ရေး လယ် ဗယ် ကို မြှင့် တင် နိုင်ရင် ဖြင့် နိုင်ငံ့ ဂုဏ် သတင်း နဲ့ အတူ သာသနာရောင်ဝါ လည်း ဂုဏ် သိက္ခာ ရှိ စွာ နဲ့ ပို မို ထွန်း ပြောင် လာ နို င် တဲ့ အကြောင်း တွေး မိ သလောက် ရေး လိုက် ရ ပါသည်။
ကွန် ပျူ တာနဲ့ မျက် နှာ ချင်း မဆိုင် နိုင် လောက် အောင်မူး နောက် နေတဲ့ ကျန်းမာ အခြေ အနေ ကြာင့် ကျမ ရဲ့ ပြီး ခဲ့ တဲ့ ပိုစ့် မှာ အဖိုးတန် တဲ့ ကွန်မန့် တချို့ ကို ပြန် လည် မဆွေး နွေး နိုင် ပဲ ဖြစ် ခဲ့ ရ တဲ့ အတွက် ဦး ပါနဲ့ အန်တီ ပဒုမ္မာ၊ ခိုင် ဇာ အပါ ၀င် ရွာသူား တချို့ ကို အနူး ညွတ် တောင်း ပန် အပ် ပါ တယ်။ အခု ပိုစ့် မှာ လည်း ကျမ တစ်ယောက် ထဲ ရဲ့ အမြင် ကို ကြိုးစား ရေး ခဲ့ ပြီး ဖြစ် လို့ ရွာသူား တွေ တွေ ရဲ့ အမြင် တွေကိုလည်း သိချင်မိ ပါတယ်။ ဒါ ပေမယ့် ကျမ ပြန် လည် ဆွေးနွေး နိုင် ခြင်း များ မရှိ ခဲ့ ရင် တော့ အာဝေနိက ပဏာ မ ဒုက္ခ တွေ နဲ့ ချာချာ လည် နေတဲ့ ကျမ ကို ခွင့် လွှတ် ပေး ဖို့ ကြို တင်တောင်း ပန် ပါတယ်။
နေကောင်းအောင် နေပါ မမိုချို။
အော်.. တားမြစ်ထားတဲ့အဆိပ်သီးကို ခူးဆွတ်ပြန်ဘီလား …
အမျိုးစောင့် ဥပဒေကြီး ပြဌာန်းပြီး တရားရုံးတစ်ခု၏ တရားခွင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တရားသူကြီး – တရားလိုမိန်းကလေးက မောင်မင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်မှ လက်ထပ်နိုင်မည်ဟု လျှောက်လွဲချက်ပေးထားသည်ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြောင်း သက်သေအား ရုံးတော်သို့ တင်ပြပါ။
တရားခံ အမျိုးသား – ဗုဒ္ဓံ သရဏံဂစ္ဆာမိ ဓမံ္မသရဏံဂစ္ဆာမိ သံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိ ပါဘုရား။
တရားသူကြီး – ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မေးမယ် တရားလိုမိန်းကလေးက မောင်မင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်မှ လက်ထပ်နိုင်မည်ဟု လျှောက်လွဲချက်ပေးထားသည်ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြောင်း သက်သေအား ရုံးတော်သို့ တင်ပြပါ။
တရားသူကြီး – နောက်ဆုံးအကြိမ် ထပ်မေးမယ် တရားလိုမိန်းကလေးက မောင်မင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်မှ လက်ထပ်နိုင်မည်ဟု လျှောက်လွဲချက်ပေးထားသည်ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြောင်း သက်သေအား ရုံးတော်သို့ တင်ပြပါ။
တရားသူကြီး – ၃ ကြိမ်စလုံး မောင်မင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထား မတင်နိုင် သည့်အပြင် “ဗုဒ္ဓံ သရဏံဂစ္ဆာမိ ဓမံ္မသရဏံဂစ္ဆာမိ သံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိ ပါဘုရား။´´ ဘဲရွတ်ဆိုပြီး ရုံးတော်ကို မထီမဲ့မြင်ပြုသည်ဟု ယူဆပါသဖြင့် မောင်မင်းအား ရက်မှန်ကြီးတစ်ပတ် အချုပ်ချစေရန် အမိန့်ချမှတ် လိုက်သည်။
ရုံးတော်ရပ်နားလို့ တရားသူကြီး စင်ပေါ်ကဆင်းလာတော့ ရှေ့ပတ်စာရေးက တရားသူကြီးနား ကပ်သွားပြီး ဒီလိုတီးတိုးစကားပြောကြတယ်
“တရားသူကြီးမင်း တရားခံအမျိုးသားက သရဏဂုဏ်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့ ဗုဒ္ဓံ သရဏံဂစ္ဆာမိ ဓမံ္မသရဏံဂစ္ဆာမိ သံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိ ပါဘုရား လို့ ရွတ်ပြတာလေ ဗုဒ္ဓာသာဘာဖြစ်ကြောင်း အကောင်းဆုံး သက်သေဘဲ မဟုတ်ဘူးလား´´
“ဟေ ဟုတ်လား၊ မင်းက တရားခွင်မှာ ထောက်ပြပါလား၊ အခုတော့ လက်လွန်ကုန်ပြီ´´
“ဟာ ငါက တစ်ခါမှ ဘုရားရှစ်ခိုး သရဏဂုဏ်မတည်ဘူးတော့ ဘယ်သိမလဲကွာ စိတ်ညစ်ပါတယ်ကွာ မတတ်နိုင်ဘူး ပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးရင် ထုံးစံတိုင်း စည်ဘီယာဆိုင်သာလိုက်ခဲ့ကွာ´´
သေသေချာချာ ဖတ်ပြီးပြီဗျာ… တော်တော်များများကို သဘောတူပါတယ်…
မမိုချိုရဲ့ ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး “ဂျာနယ်ကျော် မမလေး”ရဲ့ “လောကီ ရတနာ”ကို အမှတ်ရစေပါတယ်…
ပြောရင်လည်းမထူး နောက်ဆက်တွဲပါလာမည့် ဆိုးကျိုးတွေကို မမြင်ရင်တော့ နှစ်တစ်ထောင် ပေါ့…
ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ “လယ်တစ်ကွက်ကို ဥပဒေပြုပြီး ကင်းစောင့်”လို့ မရပါဘူးခင်ဗျား…
ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ် ကာကွယ်မှရမှာ အဓိကပါလို့…
“အာဝေနိက ချစ်ဒုက္ခ”ဆိုတော့… ဂရုစိုက်ပါ မမိုချို…
B: Leaders must obey the law.
C: Government must obey the law.
D: No one is above the law.
… တွန်းလှန်ကြပါဟေ့…. လို့ပဲ..။
ကျွန်တော် အခုအထိ ဘုန်းကြီးတွေကို မကြည်တဲ့ အထဲမှာ ကနောင်မင်းသား ဗုံးလုပ်တာကို တားတဲ့ကိစ္စပဲ…..
တချို့ ကပြောတယ် ဘုန်းကြီးက နိုင်ငံရေး မလုပ်ရင် ဘာလုပ်ရမှာလည်းတဲ့…. အဲ့လို လူတွေကိုတော့ နားတကယ် မလည်ဖူးရယ်…..
လက်တွေ့ ဘ၀နဲ့ ကင်းကွာတဲ့ အတွက် အဲဒီ ဥပဒေ က တကယ်ဖြစ်မလာ နိုင်ပါဘူး
သူ တို့ဘက် ကို မဖြစ်မနေပြောင်းရမှာ နဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေတွေ အရ
မူဆလင် နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုမှာ သဘောမကျပေမဲ့ တခြားဘာသာတွေ နဲ့က
ဘာပြသနာမှ မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်
ဥပမာ ခရစ်ယာန် မိန်းမနဲ့ ရတယ် ယောင်္ကျားနဲ့ ရတယ်
တအိမ်ထဲ သူ့ဘုရားလဲ ကိုးကွယ် ကိုယ့်ဘုရားလဲ ကိုးကွယ်
ဘုန်းကြီးကျောင်းအတူသွား ဘုရားကျောင်းအတူတက်နဲ့ အေးဆေးပါပဲ ဘာသာရေးကြောင့် ပြသနာတက်တယ်လို့ မကြားမိပါဘူး
လုပ်သင့်တာက ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာရဲ့ ကိုယ်ခံအားကောင်းဘို့ လုပ်ရမှာ
ကိုယ်ခံအား မကောင်းပဲ ဘာသာတရားကို တကယ် သက်ဝင် ယုံကြည်မှု မရှိပဲ
အဲဒီ ဥပဒေကြီး ပေါ်လာလို့ကတော့
ဆိုင်ကယ် မစီးရ အမိန့်ထုတ်တား တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ မှာ ယာဉ်ထိန်းရဲကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ ၀င်တိုက်မိသလို ဖြစ်တော့မှာပဲ
ဒီ ပို့စ် လေး ဖတ်ရင်း
အိမ်က ချစ်ချစ်ကြီး အဖြေပေးခါနီး မေတ္တာသုတ် မမေးလို့ တော်သေးရဲ့လို့ တွေးမိတယ်
ကိုဇိုမိပျောက်တယ်ဗျာ… ကိုရင်နို ချစ်ချစ်ကြီးက မေတ္တာသုတ်မမေးပဲ
လေပေါ်က ခုန်ခိုင်းခဲ့လို့ အဖြေရခဲ့တာမဟုတ်လား.. တိနေဒယ်..
အဲ့မျိုးစောင့်ဥပဒေကို လက်မခံပါဘူးဗျာ.. ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲပီး
ဆော်ဒီဥပဒေနဲ့ ရုပ်ချင်တူနေတာလည်း ပါဒါပေါ့ဗျာ..။
မဂိုမလေး ၁၀ယောက်ကို အလာရှင်ရဲ့ အလိုတော်အတိုင်း
ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရေးကိုစွက်ဖက်တာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲ
ကောင်းပါတယ်… ဘုန်းကြီးပြောတာနော်.. ဘုန်းကြီး
အားတော့နာတယ်ဗျာ…. နေမကောင်းဖူး ဆိုတော့………
တကယ်တမ်းတော့ ဒီဥပဒေ ပေါ်လာတယ်ဆိုတာ တခုတည်းသော ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ကြောင့်ပါ…..
အများလည်း သိပီးသားဆိုတော့ ထပ်မပြောတော့ပါဖူး……..
ဦးကျောက်ခဲပြောသလို လယ်တစ်ကွက် ဥပဒေပြုပီး ကင်းစောင့် လို့ မရပေမယ့်…..
ဟိုဘက် ပို့ စ်က မ၀င်းပြုံးမြင့်ပြောသလို ယောကျာင်္းက ကဲလို့ငါလည့်း ကဲမဟေ့ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့လုပ်တာတွေ များလာလို့ … တားရတဲ့သဘောပါပဲ……
ပြောလိုက်သေးတယ် “ဗမာယောကျာင်္းတွေက Virginity နဲ့တန်ဖူးတဲ့…..”
သူဆိုလို ချင်တာက ယောကျာင်္းတွေအကျင့်ပျက်လာလို့အပျိုနဲ့မတန်ဖူးလို့ ပြောတာပါ….
ဒါပေမယ့် ဟိုဘက်က ပြန်စဥ်းစားရင် ဗမာတွေ မကောင်းတာ မြင်ဖန်များလို့တခြား ဟာတွေ ကောင်းမလားလို့ပြောင်းကြိုက်သလို ဖြစ်နေတယ်……
တချို့ ကိစ္စတွေမှာ ညာဘက်ပြောင်းကြည့်လို့မကြိုက်ရင် ဘယ်ဘက် ပြန်ပြောင်းလို့ ရပေမယ့်….
တချို့ကိစ္စတွေ မှာ မရဖူးလေ…… လူဆိုတာ ရေလည်း မဟုတ် သရေကွင်းလည်း မဟုတ်….
မမိုချိုပြောသလို ပညာတက်အောင်သင် အသိညဏ်ရှိအောင် သွင်း ဆိုပေမယ့်…..
တချို့ မိန်းကလေးတွေက သိသိကြီးနဲ့မိုက်တာတွေ မြင်ဖူးပါရဲ့……..
ငါ့လယ်ကွက် ငါထွန်တာ ဘယ်ကောင်ကို ဂရုစိုက် ရမလဲဆိုတဲ့အချိုးမျိုး….. (မသိတာ လည်း မဟုတ်ဖူး သိတယ်….)
တချို့ ကတော့ စီးပွားရေး အရ မခိုင်မာလို့ ……. (သိတယ်… ဒါပေမယ့် တက်နိုင်ဖူး… မိုက်ရတော့မယ့် ပုံစံ…..)
အဲ့ဒီတော့ ပြောချင်တာက ဥပဒေ ဆိုတာ ဥပဒေပါပဲ…..
ပြည်သူတွေ အကုန်လိုက်နာ နိုင်တယ် မလိုက်နာနိုင်ဖူးဆိုတာနောက်ပေါ့…..
မိန်းကလေး ဆိုတာ အပြောကောင်းတဲ့နောက်ပါသွားတာပဲလေ…….
လွတ်လင်ခွင့်နဲ့ဖြစ်သင့်တာနဲ့ချင့်ချိန်းစဉ်းစားဖို့ ပါ…..
အများစုက ခေတ္တ သာယာမှူကို မလွန်ဆန်နိုင်ကျဖူးလေ……..
သေချာတာကတော့ မိန်းကလေး အများစုဟာ ဘယ်သူက ဘယ်လောက်ဆိုးတယ် ဆိုတာကို သေချာမသိကြပါဖူး……………. မမိုချိုလို ရှောင်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်း ရှားမယ်ဆိုတာ သတိထားမိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်…..
သေချာသိဖို့ လည်း အများကြီး လုပ်ဖို့ လိုပါသေးတယ်…………………..
မိဘအနေနဲ့ ပဲစဉ်းစားပါ……….. ကျွန်တော့်ဆီမှာ သမီး တယောက်သာ ရှိခဲ့ရင်ပေါ့………..
သားသမီးအနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ငါ့လယ်ကွက် ငါထွန်ချင်တာ ထွန်မှာပေါ့နော်…..
မျှစ်ကြော်ရဲ့ ပို့စ်ကို သေချာပြန်ဖတ်ပါဦးနော့။ ယူဆပုံလွဲနေပြီ။ ပြီးတော့ ထမင်းစားပို့စ်လေးပါ ဖတ်ပါချင့်။ ဟိဟိ။ ဆရာဂီတော့ မျှစ်ကြော်ကို သတ်ချင်နေတော့မှာပဲ။
မျှစ်ကြော်ဆိုတာ မိုချိုကိုပြောတာလားဟင်….. ထမင်းစားပို့ စ်က ဖတ်ဖူးရဲ့……… ဆြာဂီ ပြန်ပြောမှာကို စောင့်နေတာ… မနေ့ ကလည်း ကော်မန့် သာရေးလိုက်ရတာ အလုပ်က တဖတ်နဲ့ … ဂဇက်ကစာတွေ အလုပ်က အီးမွေးထဲ ထည့်မရေးမိအောင် ဂရုစိုက်နေရတယ်….
အမြင် လေးတွေ တူ လိမ့် မယ် လို့ မျှော်လင့် ထား တဲ့ အတွက် နောက် တကြော့ ပြန် အ၀င် ကို စောင့် နေ ပါတယ် နော။
ဒီ စနစ် ၊ ဒီပညာ ရေး နဲ့ ဒီ အကျင့် တွေ အတိုင်း သွား နေရင် အဲ လို တွေ ဖြစ်လာ မှာ မလွဲ ပါဘူး ။
ဦး ကျောက်ပြောတဲ့ စာအုပ် မဖတ် ဖူး သေးဘူး။ ပြန်ရှာ ဖတ် လိုက်ဦး မယ်။ ကြီး လာ မှ စာ ဖတ်တဲ့ အကျင့် တွေ တော်တော် ပျက် နေတယ်။ နှစ် တစ်ထောင်တော့ မစောင့် ပါရ စေနဲ့ တော့။
ဘုရားရှင် ရယ် ၊ တရား တော် တွေရယ် ၊ သာသနာ ကို လက်ဆင့် ကမ်း ခဲ့ တဲ့ ရှေး သံ ဃာ တွေရယ် ကို အကြွင်း မဲ့ ယုံ ကြည်ကိုး ကွယ် ပေမယ့် မျက် မှောက် သံ ဃာ တော် တွေ ကိုတော့ သဂျီး ပြော တဲ့ ၀ိနည်း ဆို တဲ့ မျက် မှန် စိမ်း တပ် လို့ ခြွင်း ချက် နဲ့ ပဲ ကိုး ကွယ် နေ မိ တော့ သူများ တွေ နဲ့ မတူ ပဲ ကွဲ ထွက် နေ တဲ့ ကိုယ့် ကိုယ် ကိုယ် တခါ တရံ အပြစ် မှ လွတ် ရဲ့ လား တောင် ထင် မိရဲ့။
ကို နိုဇို မိ
ကိုယ့် ကိုယ် ကို ကိုယ် ခံ အား ကောင်း အောင် လုပ် ဖို့ က အရေး ကြီး ဆုံး ပါပဲ။ ဥ ပဒေ ကြီး နဲ့ အတင်း ကိုင် ထား လဲ စိတ်ထဲက မပါရင် မတည် မြဲ နိုင် ပါဘူး။
အိမ် က လူကြီး ကတော့ အဲတုန်း က မေတ္တ သုတ် တင် မက ဘူး ဓာရဏ ပရိတ် ပါ အစစ် ရွက် ပြ သေး တယ်။
ကိုရင် စည် ရဲ့
အဲ ဥ ပဒေကြမ်း အရ တော့ ညဉ်း တို့ အထီး တွေ ကတော့ ယူ ခွင့် ရှိ တယ် ဆို သလား ပဲ။
ကျမ မကြိုက် တာ လည်း အဲဒါ ပဲ။ အဲဒီ ဘာ သာ ကို ကြည့် မရဘူး ဆို ပြီး လိုက် လုပ် နေ သမျှ အဲ ဘာသာ ကို ပဲ ပုံ တူ ကူး နေကြတယ်။ တာလီဘန် လမ်း စဉ် လိုက်ပြီး အာ ဖဂန် လို ပုံ သွင်း ချင်နေကြတယ်။
ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကြရင် ပြီးသွားမဲ့ ကိစ္စတွေပါ..
အင်း.. မြန်မာ ဗုဒ္ဒဘာသာ အမျိုးသားဆိုသူများ ဘာသာခြားတွေကိုအပုတ်ချနေမဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်တိုးတက်ရေးသာကြိုးပမ်းမယ်ဆိုရင်…
ကုလားမုန်းတယ်ဆိုပီး… ဆော်ဒီလမ်းဇင် လိုက်နေတဲ့ကိစ္စဒွေ ဖြစ်လာစရာမရှိ….
ခွဲတဲ့နေရာမှာတော့ လူမျိုး၊ ဘာသာ နဲ့ လုံးဝမကြည့်ပါဘူး…
ဥာဏ်ရည်နိမ့်သူက ခွင့်လွတ်လို့ရသေးပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်နိမ့်သူကတော့ အတော် အော့နှလုံးနာစရာကောင်းတာပါ….
ဝါး ကို ထပ်ဆင့်ထောက်ခံပါတယ်။
ပြောတာဆိုတာမှာ ဒေါသသံ မသင့်တာကိုလည်း လေးစားပါတယ်။
ကို တိမ် မည်း
၀င်ရောက် ဆွေး နွး တဲ့ အတွက် ကျေး ဇူးပါ။
ကျ မ ကလည်း ဥ ပဒေ နဲ့ အတင်း ချုပ် ကိုင် တဲ့ တန် ဖိုး နဲ့ ကိုယ် တိုင် ရင် ထဲ ၊ ဦး နှောက် ထဲက လာ တဲ့ တန်ဖိုး ချင်း ကွာ တာ ကို သိစေ ချင် တာ ပါ။ ဒီ လို ကိုယ် ပိုင် အသိနဲ့ ရှိ လာ ဖို့ ဆို တာ လည်း သိပ် မခက် ခဲလှ ပဲ၊ ပညာ ရေး စနစ် လေး မြှင့် တင် ပေး လိုက် ရုံ ၊ ကိုယ် တိုင် တွေးတော တတ် တဲ့ ပညာ ရေး ကိုဦး တည် ပေး ရုံ နဲ့ ဖြစ်လာ နိုင်တာ ကို ဆို ချင် ပါတယ်။ ကျမ ပိုစ့် မှာ ပါ ခဲ့ သလို ပါ ပဲ တကယ်ကြီး လို အပ်နေ ပြီ ဆိုရင် တော့ ဒိထက် တိ ကျ တဲ့ နည်း လမ်း တွေ နဲ့ ဥ ပဒေပြု ပညာ ရှင်တွေ နဲ့ တိတိ ကျကျ ရေး စွဲ၊ မြန် မာ ပြည် ရဲ့ အသား ကျ နေတဲ့ အစဉ် အလာ တွေ အတိုင်း မဖြစ် စေ ပဲ ထိထိ ရောက် ရောက် အရေး ယူ။
ဆိုရရင် ကင်ဆာ အဆင့် ရောက်နေ ပြီ ဆို ရင်တော့ ဆေး မြီး တို နဲ့ မသွား ပဲ ဓါတ် ကင် တန် ကင် ၊ လှီး တန် လှီး ပေါ့ လေ။ အဲ လို မှ မဟုတ် ပဲ လက် တလော အကြောင်း အရာ တွေ ကြောင့် ကောက်ရိုး မီး ထ တောက် တာ ဆို ရင် တော့ လက် ရှိ ဖြစ် စဉ် တွေ အပေါ် အမြင် မှန် မှန် သုံး သပ် တတ် ဖို့ လို ပါတယ်။
ကျ မလည်း အခု လွယ် ထား တဲ့ ရင် သွေး လေး ကို သမီးလေး ဖြစ် စေချင် ပါတယ်။ ကျမ အတိုင်း စိတ် မပျော့ သော၊ အယုံ မလွယ် သော၊ ညာဏ် ရည် ညာဏ် သွေး နဲ့ ကိုယ့်အား ကိုယ် ကိုး တတ်သော စတဲ့ ကျမ နဲ့ ထပ်တူ ညီ တဲ့ ကိုယ် ပွား လေး ဖြစ် အောင် ပြုစု ပျိုးထောင် ပေး ဖို့ ရည် ရွယ် ထား ပါတယ်။
အခု အခြေအနေက တကယ်မလွယ်ဘူး။ နယ်မှာနေတဲ့လူဆိုတော့ ပိုမြင်တွေ့နေရတယ်။ လူတိုင်းလိုလိုဟာ ဖြစ်ချင်ရင် ဓမ္မကထိကဖြစ်လို့ရနေတယ်။ ကျောင်းမှာဆိုရင်လည်း ဓမ္မစကူးလ်ဖြစ်ကြောင်း ကလေးတွေကို သင်ပေးကြတယ်။ အခု မအူပင်မြို့ တစ်မြို့လုံးမှာ အမဲသား လုံးဝလုံးဝ မရှိတော့ဘူး။ မြို့ပေါ်က သူဌေးတစ်ယောက်က နွားသတ်လိုင်စင်တွေ အကုန် ၀ယ်ပစ်လိုက်လို့။ အဲဒီလုပ်ရပ်တွေ ကောင်းလားဆိုးလား ဝေဖန်ချင်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါ။ ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်အနေနဲ့ကြည့်ရင် အာဖဂန်မှာလည်း ဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်မှာ မူဆလင်ဘာသာရေးဆရာတွေ တန်ခိုးထွားခဲ့တာကနေစပြီး အာဖဂန်နစ္စတန် ဖွတ်ဖွတ်ကြေအောင် ပျက်ခဲ့တာ။ ဘယ်တိုင်းပြည်မဆို ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးဆရာ သို့မဟုတ် ဘုန်းကြီးတွေ (မွတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခရစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဗုဒ်ဓပဲဖြစ်ဖြစ် ) ဘာသာရေးက နိုင်ငံရေးထဲဝင်ရင် တိုင်းပြည်ပျက်မှာပဲလို့ ယုံတယ်။ မှားရင်လည်း ထောက်ပြကြပါ။
မမိုချို နှင့်​တကွ ကွန်​မန့်​​ပေးသူတို့ရဲ့အချက်​​တွေကို​ထောက်​ခံ သ​ဘောတူပါတယ်​။
အရင်​ဦးစွာ ကျ​နော်​ ​ထေရဝါရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​ စစ်​စစ်​ပါ။ဘုရားစာ​တော့မဆိုခိုင်းနဲ့​နော်​(မရလို့ပါ)။
ကျ​နော်​အမြင်​​ပြောရင်​ (ပို့နှင့်​မဆိုင်​ပါက ခွင့်​လွှတ်​ပါ) အလွန်​များတဲ့ အကျင့်​ပျက်​ဘုန်းကြီး​တွေကို
အ​ရေးယူ လူဝတ်​လဲ​ပေးမဲ့ သံဃာအဖွဲ့အစည်း​တွေ အရင်​ဖွဲ့ပြီး သာသနာသန့်​ရှင်း​ရေးလုပ်​သင့်​တာပါ။
ဘာသာ သာသနာကို​စောင့်​​ရှောက်​တဲ့ ဘုန်းကြီး​တွေမှ အကျင့်​သီလမ​ကောင်းရင်​ ယင်​ဘုန်းကြီးအတု
​တွေကိုမြင်​​တွေ့​နေရတဲ့ ​ခေတ်​လူငယ်​​တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဘယ်​​လေးစားတန်​ဖိုးထား​တော့မလဲ။
အမှန်​ကဘုရား​စေတီ​တွေ အများကြီး​တည်​ထားကိုးကွယ်​မှာထက်​ က​လေးလူငယ်​ အ​ခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာ
သင်​တန်း​တွေများများဖွင့်​ပြီး လူငယ်​လူရွယ်​​တွေရင်​ထဲ ဗုဒ္ဓတရားဓမ္မ​တွေ​ရောက်​​စေချင်​တယ်​။
ဗုဒ္ဓရဲ့မွန်​မြတ်​သန့်​စင်​တဲ့ တရား​တွေကိုငယ်​ရွယ်​စဉ်​ကတည်းက ရင်​ထဲအ​သွေးထဲ ​ရောက်​​နေရင်​
ဘယ်​ဘာသာကိုမှ ကူ​ပြောင်းဝင်​​ရောက်​စရာမရှိပါ။ဘာသာခြားကို လက်​ထပ်​ရင်​​တောင်​ ဘာသာမ​ပြောင်း
ယ​နေ့​ခေတ်​မှာသင်္ဃန်း​ကိုအသုံးချပြီး ​တောင်းစား​နေ​သောဘုန်းကြီးအတု၊ချဲ နှစ်​လုံး​ရောင်းချ​နေ​သော
ဘုန်းကြီးတု (ဆက်​​ပြောရင်​အဆဲခံရ​တော့မှာ အတု​အ​ယောင်​​တွေမှအများကြီးကျန်​)စတဲ့ဘုန်းကြီးတု
​တွေကိုအရင်​ သာသနာသန့်​ရှင်း​ရေးမလုပ်​ပါက ကြိုက်​တဲ့ဥပ​ဒေထုတ်​ ထုတ်​တဲ့ဥပ​ဒေကိုမလိုက်​နာတဲ့သူ
နှင့်​ အမြတ်​ထုတ်​မဲ့သူ​တွေပဲ ​ပေါ်လာကြလိမ့်​မယ်​။
သာသနာသန့်​ရှင်း​ရေးလုပ်​ပြီးဆိုတာနဲ့ တပြိုင်​နက်​ က​လေးလူငယ်​ ဆိုင်​ရာဓမ္မသင်​တန်းများ ဖွင့်​လှစ်​
ပို့ချရပါမယ်​။ ဖြစ်​နိုင်​ရင်​ ဓမ္မသင်​တန်း​တွေကိုဦးဇင်း​တွေအစား ဦးဂိုအင်​ကာ လိုလူဝတ်​​ကြောင်း
ဓမ္မဆရာ​တွေ သင်​ပြ​ပေးရင်​ပို​ကောင်းလိမ့်​မယ်​ ထင်​ပါတယ်​။လူငယ်​လူရွယ်​​တွေအ​နေနဲ့က သံဃာ​တွေ
နဲ့ ​ပြောဆိုဆက်​ဆံ​ရေးမှာ အခက်​အခဲ၊အ​နေအထိုင်​အပြုအမူ အခက်​အခဲ ရှိပါမယ်​။ဘုန်းကြီးအတု​တွေ
အ​ကြောင်း​ပြောလို့ဆဲမဲ့သူ​တွေအတွက်​ ကျ​နော်​ကအဲဒီ ဝိနည်းနဲ့မညီတဲ့ဘုန်းကြီး​တွေနဲ့ ပက်​သက်​တဲ့
အသိုင်းအ၀န်းနဲ့ဆက်​ဆံ​နေလို့ သိတာပါ။မယုံရင်​ အိမ်​​တော်​ရာဘုရားကြီးအနားက ဘုန်းကြီး​ကျောင်း
​တွေကို သွား​ရောက်​​လေ့လာကြည့်​ပါ။အသ်ိ မန္တ​လေးသူား​တွေကို ​မေးကြည့်​ကြပါ။​ပြောချင်​တာက
အများကြီးပါ။အနှစ်​ချုပ်​ရရင်​ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မိရိုးဖလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်​​တွေက စိတ်​ထဲကသက်​ဝင်​ယုံကြည်​
တဲ့ဘာသာဝင်​စစ်​စစ်​​တွေ ဖြစ်​​အောင်​ သံဃာထုတစ်​ရပ်​လုံးက အရင်​ပြုလုပ်​သင့်​ပါ​ကြောင်း ဆန္ဒပြုပါတယ်​။
အစိုးရနှင့်​ပြည်​သူ​တွေက ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုး​ပေးကြပါစို့။အများနဲ့မတူ အမှားပါရင်​ ခွင့်​လွှတ်​ပါခင်​ဗျာ။
ဟိုလူရီး ဝေါ်လ်ပေါ်က မ-လာတာ ပြန်လာအူးမယ်
အောက်ပါဥပဒေများ ထုတ်ပြန်ရန် အဆိုပြုပါသည်-
(၁) ဘုန်းကြီးများ ချဲမတွက် ချဲမထိုးရေးဥပဒေ
(၂) ဘုန်းကြီးများ ငွေတိုးမပေးရေးဥပဒေ
(၃) ဘုန်းကြီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုကြေညာရေးဥပဒေ
ပို့စ်တင်တဲ့ မိုချိုကိုလည်း ထောက်ခံပါဂျောင်းးးး
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီးများ ဘာသာခြားအမျိုးသား တဦးနှင့်လက်ထပ်မည်ဆိုပါက ထိုဘာသာခြား အမျိုးသားသည် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းရမည်ဆိုတာကို ဥပဒေအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းဖို့ သံဃာတော်တချို့ မှော်ဘီမြို့တွင် မကြာသေးခင်က ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသည့် ဆရာတော်များကတော့ ဦးဝီရသူနှင့် ဦးဓမ္မပီယတို့ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ အဲတာအပြင် ထိုဆရာတော်များနှင့်အတူ လူ့အခွင့်အရေး အာမခံချက်ရှိသော၊ ဒီမိုကရေစီ ဘိုးအေလည်းဖြစ်သော အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရရှိထားပြီး ယခုအခါ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ဖြစ်နေသော ဆရာ တော် ဦးဥတ္တရကိုလည်း ဓာတ်ပုံထဲတွင် တွေ့ရသည်။
၁။ ဒီအဆိုကိုပြန်ကြည့်ပြီး သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီးများကို ကာကွယ်ပေးဖို့ဟု ရည်စူးထားဟန် တူသော်လည်း လက်တွေ့တွင် အမျိုးသမီးများအား ချုပ်ချယ်ကန့် သတ်ထားသော လူ့အခွင့်အရေးကို သွယ်ဝိုက်၍ ချိုးဖောက်ထားသော အဆိုဖြစ်နေသည်။ ဆိုလိုတာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတွေ သူတို့နှစ် သက်သဘောကျသည့် အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် ထိမ်းမြားရန် ကန့်သတ်ထားသည့် အဆိုဖြစ်နေသည်။
မွတ်စလင်ဘာသာဝင် အမျိုးသားများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများ လက်ထပ်မှာကို စိုးရိမ်ပြီး ဒီအဆိုကို ဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်လို့ မြင်သည်။ ဘာသာခြားနှင့် အိမ်ထောင်ပြုသည့် ကိစ္စဟုဆိုထား သဖြင့် ပြောရမည်ဆိုလျှင် ဤအဆိုသည် ဥပဒေတခုဖြစ်သွားပါက အစ္စလမ် ဘာသာဝင်သာမက ခရစ်ယန်၊ ဟိန္ဒူ၊ နတ်ကိုးကွယ်သူ၊ ရေဝတီဘာသာ အစရှိသော ဘာသာဝင်အမျိုးသားများ အတွက်ပါ အကြုံးဝင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ဒီအဆိုကို ဥပဒေတခုဖြစ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်သလားဆိုတာ ပြန်ကြည့်ဖို့ လိုလာသည်။ ဆိုလို သည်ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသမီးများ မြန်မာပြည်တွင်းတွင် ဘာသာခြားအမျိုးသားများနှင့် လပ်ထပ်ထိမ်း မြားနေတဲ့ ရာခိုင်နှုန်း စိုးရိမ်ကြောင့်ကျဖွယ် တိုးတက်များပြားလာနေ၍လော။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများ မွတ်စလင် တွေနဲ့ ယူနေသည်မှာ သန်းဂဏန်းအထိ ရောက်ရှိနေ၍လော။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများ မြန်မာနိုင်ငံသား မွတ်စလင်များနှင့် လက်ထပ် ထိမ်းမြားမှု အနည်းအကျဉ်း ရှိနိုင်သော်လည်း များသထက်များလာတယ်လို့ မကြားမိပါ။ အမျိုသမီးထုကို အထင်အမြင်သေးသည့် အမြင်ကနေ ပေါ်ပေါက်လာသည်ဟု ပြောလိုသည်။ မိန်းမဆိုတာ နှာခေါင်း မပါရင် ဟိုဟာတောင်စားမယ်ဟု အထင်ရောက်နေသည့် ယောက်ျားကြီးဝါဒကနေ ပေါက်ဖွားလာတာဟု ဆိုပါရစေ။ အမျိုးသမီးများကို အထင်အမြင် မသေးသင့်ပါ။ အမျိုးသားတွေလည်း မိခင်ဆိုသော အမျိုးသမီးများ၏ ဝမ်းကြာတိုက်မှ မွေးဖွားပေးလိုက်၍ လူဖြစ်လာကြသည် မဟုတ်လော။
၂။ ဒီအဆိုဟာ ယခုဖြစ်နေသော နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များကို လမ်းလွှဲရန် ရည်စူးသည်ဟု မြင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဂုတ်ခွစီး ပြီး အမြတ်ထုတ်နေတာ မြန်မာနိုင်ငံသား မွတ်စလင်များမဟုတ်ပါ။ ဦးပိုင်နှင့် ပေါင်းစားနေသော တရုတ်ကုမ္ပဏီများသာ ဖြစ်သည်ကို မမေ့သင့်။ စစ်တပ်လူတန်းစားနှင့် တရုတ်တို့သာ အမြတ်ထွက်နေသည်ကို ဘာကြောင့် မေ့ထားကြသ နည်း။ ဥပမာတခုပြောမည်ဆိုလျှင် ယခုအချိန် မန္တလေးကို စီးပွားရေး လူမျိုးရေးအရ စီးထားသည်မှာ နောက်ဝင်လာ သော မြန်မာစကားမတတ်သည့် တရုတ်များသာ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့ တရုတ်တွေ ငွေပေး၍ မြန်မာ မှတ်ပုံ တင်ကိုင်ထားသည့် ကိစ္စကိုတော့ ဘာကြောင့် အခုအထိ မပြောကြသေးသနည်း။ အခုတော့ မှတ်ပုံတင်ကို ကိုင်ရုံ မဟုတ် မြေတွေယာတွေပါ တစတစ သူတို့ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသည်မှာ မနည်းတော့။
မြစ်ဆုံကိစ္စ၊ လက်ပံတောင်းကိစ္စ၊ လယ်မြေယာမြေ သိမ်းသည့်ကိစ္စ၊ ရခိုင်က ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကိစ္စ၊ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်လိုသည့် ကိစ္စ အစရှိသော များပြားလှသည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် လူတွေ အာရုံ မရောက်စေရန် လမ်းလွှဲသော လုပ်ရပ်ဟု ထပ်ပြောလိုသည်။ ကုလားမုန်းတီးရေး မွတ်စလင်မုန်းတီးရေး လုပ်နေကြသည်။ လူမျိုးရေး သွေးထိုးသည် မဟုတ် သို့သော် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ကြေမွအောင်သမနေသည့် တရုတ်ကုမ္ပဏီနှင့် နိုင်ငံသားအတု တရုတ်မုန်းတီးရေး ကိုတော့ ဘာကြောင့် မလုပ်ကြသလဲဟု မေးခွန်းမေးစရာ ဖြစ်လာသည်။ မွတ်စလင်မုန်းတီးရေးကို ဦးပိုင်နှင့် တရုတ် ကုမ္ပဏီများက နောက်ကွယ်ကနေ ငွေကြေးထောက်ပံ့ နေသလားဟုပင် ထင်ရသည်။
သမ္မတအကြံပေးဆိုသူများတွေလည်း ဒါမျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထောက်ပြပြောဆိုခြင်း မရှိကြ နှုတ်ဆိတ်နေကြသည်။ အလားတူပင် နိုင်ငံရေးသမားများလည်း ပါးစပ်ပိတ်နေကြသည်။ မီဒီယာများလည်း ကြားနေနေကြသည်။ အကျဉ်းသား ဟောင်း သူရဲကောင်းများလည်း အာစေးမိနေကြသည်။ နည်းနည်းဝင်ပြောမိသည့် ဒေါ်စုလည်း ထောင်ချောက်ကို မြင် လို့လားမသိ ကိုယ်ရှိန်သတ်သွားသည်။ ဒီကြားထဲ ကုလားနဲ့ ပေးစားခံလိုက်ရသေးသည်။ မွတ်စလင်မုန်းတီးရေး လှုပ်ရှား မှုများသည့် ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် တဖြေးဖြေးနှင့် လက်နက်တခုသဖွယ် ဖြစ်လာသည်။ လူ့အခွင့်အရေးဟု မွတ် စလင်များဖက်မှ ပြောမိသူနိုင်ငံရေးသမားသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲရှုံးနိုင်သည့်ကိန်း ဆိုက်နေသည်။
၃။ အင်စတီကျူးရှင်းများကို အလွဲသုံးစားလုပ်
မြန်မာပြည်တွင် ရိုးရာအရ အင်အားကောင်းသော အင်စတီကျူးရှင်း (အဖွဲ့အစည်း) နှစ်ရပ်သာ ရှိသည်။ အဲဒါကတော့ စစ်တပ်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော်များ ဖြစ်သည်။ လူအနေနဲ့ ရှစ်တန်းပင် မအောင်သောသူများက မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင် အမျိုးသမီးများအတွက် လက်ထပ်ထိမ်းမြားရေး ဥပေဒေပြုလုပ်လိုသည်ဆိုလျင် ဘယ်သူကမှ အရေးစိုက်မည်မ ဟုတ်။ ပညာရှင်အတော်များများက ပြောလာသည်ဆိုပါက အနည်းနဲ့အများ လူတွေက စိတ်ဝင်စားနိုင်သေးသည်။ အခု ဖြစ်နေတာက လူတွေက ကြောက်နေရသော စစ်တပ်က ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို တဖက်သတ် ရေးခဲ့၍ အတည်ပြုခဲ့သည်။ အခုတခါ လူတွေကြည်ညိုသော သံဃာတော်ဆရာတော် တချို့က လက်ထပ်ထိမ်းမြားရေး ဥပေဒသစ်တခုကို ဖန်တီးဖို့ ကြိုးစားနေသည်။ ဒါဟာ မိမိတည်မီနေတဲ့ အင်စတီးကျူးရှင်းကို နောက်ခံထားပြီး အလွဲသုံးစားလုပ်တာပင် ဖြစ်သည်။
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေအသစ်လိုအပ်ပါက တိုင်းသူပြည်သား လူအများက နိုင်ငံရေးအရ တခဲ နက် တောင်းဆိုလာလိမ့်မည်။ အခုဖြစ်နေသည်က လူတွေနားမလည်၍ သံဃာတော်များက ဦးဆောင်ပေးနေရသည် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးကိုသွားနေသည်။ လက်ပန်တောင်းလို အရေးအခင်းမှာ နစ်နာနေတဲ့ လယ်သမားတွေနဲ့ အတူရပ်ခံခဲ့တဲ့ သံဃာတော်များကို အထူးလေးစားသည်။ ဒါပေမယ့် တချိန်ထဲမှာလည်း အီရန်က သြဇာအာဏာကြီးမားသော ဘာသာ ရေးခေါင်းဆောင်များကို အားကျနေသော မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော်များရှိနေသလောဟု အတွေးရောက်မိသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားနှင့်သာ လက်ထပ်ရမည်၊ အမျိုးသားဖက်က ဘာသာ ခြားဆိုပါက ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းရမည်ဟု ဆိုသည်ကို ဥပဒေပြုမည်ဟု ကြိုးစားလာသည်။ ဤသည်မှာ လူတဦးကို ကန့်သတ် ချုပ်ချယ်ထားသလို နောက်လူတဦးကိုလည်း ၎င်း၏ ယုံကြည်သက်ဝင်မှုကို စွန့်လွှတ်ရမည်ဟု ဆိုခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ တရားပါသလော။
၄။ ဒီကိစ္စဟာ ဒီမှာရပ်နေမည်မဟုတ်
ဥပဒေပြုတာက အတည်ဖြစ်သွားရင် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတွေအတွက် တသက်တာ စိတ်ချသွားရပြီလို့ ဆို နိုင်သလား။ ဥပမာ မွတ်စလင်ကိုးကွယ်သူ အမျိုးသားတဦးက ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ ချစ်ကြိုက်လို့ အိမ်ထောင်မ ပြုခင် မွတ်စလင်ထဲကထွက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကူးပြောင်းတယ်ဆိုပါစို့။ အဲဒီသူဟာ တချိန်က မွတ်စလင်ဖြစ်ခဲ့တာမို့ မွတ်စ လင် ရပ်ကွက်တွေကို ရိုးရိုးသားသား အလည်အပတ် သွားတာမျိုး ရှိနိုင်သည်။ ဗလီမှာ မိတ်ဆွေတွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားစကားပြောမျိုး ရှိချင်ရှိလိမ့်မည်။ အဲသလို အခါမျိုးမှာ ဒီလူဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို တကယ်မယုံကြည်ဘဲ အိမ်ထောင်ပြု ဖို့အတွက်သာ ဘာသာပြောင်းချင်ယောင်ဆောင်ထားတယ်လို့ ရုံးတင်စွပ်စွဲပြီး ထောင်ချမလား။ တခါက မွတ်စလင် ဖြစ် ခဲ့တာမို့ အရင်ကလည်း ဝက်သားမစားဘူး အခုလည်း မစားဘူး။ သို့သော် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကူးပြောင်းတာ စစ်စစ်မှန်မှန် ဖြစ် ကြောင်း ပြသဖို့ လူတွေရှေ့မှာ ဝက်သားစားပြရမှာလား။ ဝက်သားစားမပြရင် ဒီလူဟာ တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သေး ဘူးလို့ စွပ်စွဲပြီး လိမ်လည်မှုနဲ့ ထောင်ချမလား။ မုတ်ဆိပ်မွှေး မရိပ်ဘဲ ဆက်ထားရင် ဒါဟာ မွတ်စလင်ဖြစ်နေသေး ကြောင်း သက်သေ ဖြစ်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရပြီး ရုံးရောက်ဂတ်ရောက် ဖြစ်ဦးမလား။
ဒီဥပဒေ အတည်ဖြစ်သွားခဲ့ရင် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာနိုင်တာတွေ ပြောလိုသည်။ ခရစ်ယန်များတဲ့ ပြည်နယ်ကလည်း ခရစ်ယန်အမျိုးသမီးများ အကာအကွယ်ရရှိဖို့ ဥပဒေပြုပေးဖို့ တောင်းဆိုလာနိုင်သည်။ ရှမ်းပြည်မှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုဖြစ်ပေမယ့် ရှမ်းလူမျိုးရဲ့ ဘာသာစကား၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေ မတိမ်ကောစေဖို့ ရှမ်းပြည်နယ် ဒေသအတွင်း ရှမ်းအမျိုးသမီးတွေ တခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးတမျိုးမျိုးနှင့် လက်ထပ်ခွင့်မရှိ ဆိုတဲ့ ဥပဒေမျိုးလည်း ပေါ်လာနိုင်သေး သည်။ တခါ ရှမ်းပြည်အတွင်း မြန်မာအမျိုးသားတဦး ရှမ်းအမျိုးသမီးတဦးနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားလိုပါက ဗုဒ္ဓဘာသာ ချင်း တူတာမှန်ပေမယ့် လူမျိုးမတူ တာကြောင့် မြန်မာအမျိုးသားဟာ ရှမ်းစကား ရှမ်းစာပေ တတ်အောင်သင်ပြီးမှာ လက်ထပ်ခွင့် ရှိမယ်လို့ ဥပေဒ ပြဋ္ဌာန်းထားရင်ကော မြန်မာတွေဖက်က ဘယ်လိုမြင်မလဲ။
လူတွေဟာ ဆင်းရဲတွင်းထဲမှာ နက်သထက်နက်အောင် နေလာရရင် မထူးဇာတ်ခင်းလေ့ရှိတဲ သဘာဝ ရှိသည်။ သူခိုး ဂျပိုးတွေ များလာသလို ပြည့်တန်ဆာဖြစ်တာတွေလည်း များလာလေ့ ရှိသည်။ ဘဝထွက်ပေါက်အတွက် ပိုက်ဆံရှိသော ချမ်းသာသော ဘာသာခြားနှင့်လည်း (မွတ်စလင်ဖြစ်ဖြစ် ၊ ခရစ်ယန်ဖြစ်ဖြစ်) ယူကောင်းယူနိုင်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီးတွေ ဘာသာခြားနှင့် အထူးသဖြင့် မွတ်စလင်ဘာသာဝင်များဖြင့် အိမ်ထောင် မပြုစေလိုပါက လူထုအား ဆင်းရဲတွင်းထဲက ဆွဲထုတ်နိုင်အောင် စီးပွားရေးစနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည်။ ပညာမဲ့ ဘဝ မှနေ၍ ပညာတတ်များ ဖြစ်လာအောင် ပြုစုပျိုးထောင်ရမည်။ ဤသည်သာ မှန်ကန်သော ကယ်တင်မှုဟု ဆိုရပေမည်။ ဥပဒေပြုတာ တခုထဲနဲ့တော့ မကယ်တင်နိုင်ပါဟု ထောက်ပြလိုသည်။ နောက်ဒီလို ဥပဒေမျိုးက အမျိုးသားရေး အစွန်း ရောက်တာမို့ ဒီမိုကရေစီကိုချီတက်နေသော တိုင်းပြည်တခုမှာ ပြုကောင်းသည့် ဥပဒေမျိုးလည်း မဟုတ်ပါ။
နောက်ဆုံးအချက် တိုင်းပြည်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေ ဆင်းရဲနေတာ ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ ဘယ်သူတရားခံလဲ ဆိုတာကို မြင် အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့ ပြောလိုသည်။
နောက်တခုကတော့ ချွင်းချက်ဖြစ်သည်။ ချွင်းချက်လို့ ဆိုတာက ဘာသာမတူသော်လည်း လူသားတွေ ဖြစ်တာမို့ တဦး နှင့် တဦး မေတ္တာသက်ဝင်ပြီး တအိုးတအိမ် ထူထောင်နိုင်တာမျိုးလည်း ရှိနိုင်သည်။ တဦးနှင့်တဦး မိုင်ပေါင်း ထောင်ချီ ဝေးသော နေရာမှ လူများ တွေ့ကြဆုံကြ၊ ဆက်ဆံကြ၊ ပေါင်းသင်းကြ ဆိုသည်မှာ ရှေးကပါလာသည့် ပဋ္ဌာန်းဆက် ကြောင့် ဖြစ်သည်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဆိုထားသည် မဟုတ်လော။
၁၄ ရက် ဇွန်လ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်
ဖေ့ ဘွက် ပေါ် မှာ အဲ လို အဲလို ချက်လ လက်ကျ ရှင်း ထား တဲ့ ပိုစ့် တွေ ဖတ် ရတော့ ဒီ လို လူ တွေ လည်း ရှိ သေး တာ ပဲ လို့ ကျေ နပ် မိရတယ်။ ချီးလည်း ကျူး မိတယ်။
ဆိုတဲ့ စကား ကို အစ်မ လည်း ထပ်တူ သဘော တူ တယ်။
ကိုယ့် ဘာသာ တိုးတတ်အောင် လုပ်တယ် ဆိုပြီး သူများ ကို အပုပ်ချ နေမဲ့ အစား ကိုယ့် ဘာသာ အတွက် သိမ်သိမ် မွေ့ မွေ့ နဲ့ ဘယ် လို လုပ် သင့် တယ် ဆိုတာ အတု ယူ သင့် ကြတယ်။ ဥပမာ ..ဒီ ရွာ ထဲ မှာ ကို လူဟား ရေး ထား တဲ့ ပိုစ့် တစ်ခု ရှိတယ်။
ကျမ အစိုး ရိမ် ဆုံး ကလည်း အဲ ဒီ တိုင်း ပြည် ပျက် မဲ့ အရေး ပဲ။ အတိအကျ ပြော ရရင် တမင် ဖျက်ပြီး မှ ပျက် တယ် ဆိုပြီး အကယ် ခံ ရမှာ ကို စိုး တာ။
လူ ငယ် တွေ ကိုယ့် အမျိုး ဘာသာ ကို စိတ်ဝင် စား လာ ကြတာ အားပေး ပေမယ့် ပညာ၊ သတိ နဲ့ ယှဉ် တဲ့ အမျိုး ဘာသာ ချစ် စိတ် ဖြစ် ဖို့ တော့ လိုတယ်။
စကား မစပ် အမ ရဲ့ နာမ်စား မျှစ်ကြော် ပြုံး ကိုတွေ့ တိုင်း မြန် မာပြည် က မျှစ်နုနု မျှင်မျှင် လေး တွေ ကြော်တာ စား ချင် လွန်း လို့ သရေ ကျ ရတယ်။
ကို ကျော် ထိုက်
ကျမ သဘော ကလည်း အဲ လို ပါပဲ ။ အပြင် မှာ ဘုရား တည် တာ ထက် နှလုံး သား ထဲ မှာ တည် နေ ဖို့ ပို အရေး ကြီး တယ် လို့ ထင် မိပါတယ်။ တခြား ဘာသာ တွေ မှာ က ကလေး ဘ၀ ထဲက အဲ လို ရိုက် သွင်း ထား ကြပါတယ်။
ဘုန်း ကြီး ကိစ္စ ကတော့ ပြောရရင် ပိုစ့်  တစ်ခု ဖြစ်သွား လိမ့် မယ်။
၂လုံး ၊ ၃ လုံး တင် မကဘူး ၊ ဘောလုံး ပါ လောင်း သေး တယ် ။
တခါ အိမ်နား ဘုန်း ကြီးကျောင်း ဆွမ်း ချိုင့် သွား ပို့ တာ ကျောင်း ပေါ် မှာ တင် ချဲ ရောင်း နေတယ်။ ဘုန်း ကြီး ကိုယ် တိုင် ဒိုင် ကိုင်နေသလား ၊ ရောင်း တဲ့ လူ ကပဲ လမ်း ကြောင်း ရှင်း တဲ့ ကျောင်း ပေါ် လာရောင်း နေတာ လား တော့ မသိဘူး။ ဒကာ မကြီး တို့ ထိုး သွား အုံး လေ တဲ့ …ဘုန်း ကြီး က။
အပေါ် မှာ ကို ကျော် ထိုက် ပြော သလို ပဲ အဲ လို သံဃာ တွေ ကြောင့် တကယ် စစ် မှန် တဲ့၊ ၀ိနည်း တော် အတိုင်း နေတဲ့ သံဃာ တွေ ရဲ့ ပုံ ရိပ် ကို ထိခိုက် စေတာ အမှန်ပဲ။
အဲ့သည်အကြောင်းကိုစပြီးပြောတဲ့ ဆရာတော်ခေါ်ရမလား ဘုန်းကြီးခေါ်ရမလား
( မည်သည့်ဘာသာဝင်မဆို ဘာသာခြား၊ လူမျိုးခြားဖြစ်ခဲ့ပါက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးကို လက်ထပ်မည်ဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင် လက်မှတ်ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည် )
ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးအနေနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာကို လက်မှတ် ( စာရွက် )
ကလေးနှင့် လို့ပြောတာက ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေကို စော်ကားနေသူလို့တောင်မြင်မိပါတယ်
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတောင် မသတ်မှတ်တဲ့ကိစ္စ သူတို့က ဘောင့်မယ့်လုပ်ကြပါလိမ့်နော
ကျနော် လည်း ပြောရင်းနဲ့ ဘာသာခြား ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ သူတို့ ပါးစပ်ထဲ ရပြီးပြီလည်းတော့မသိ။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံကလူတွေက ကိုယ့် အလုပ်ကို ကျေပွန်အောင် လုပ်ဖို့ထက် မဆိုင်တာ ပါဖို့ ဆရာကြီးလုပ်ဖို့ အင်မတန်တက်ကြွကြပါတယ်။
သူများကို မပုတ်ခတ်ပဲ ကိုယ့်တာဝန်ကို ကျေသူ ခပ်ရှားရှားပဲ။
သင်္ကန်းဝတ် သံဃာမှာ သာသနာပြန့်ပွါးရေးလုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
အမျိုးသမီး လင်ယူသားမွေးကိစ္စပါတာ။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ဟိုပြောဒီပြော ပြောတာ စတာတွေက အလုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ မြင်တာပါပဲ။ ကျနော် သင်္ကန်းကိုအားနာလို့ ဒီလောက်ပဲ ပြောပါရစေ။
ခုမှ တရေးနိုးတဲ့ ခါတော်မှီမျိုးချစ်သကောင့်သားများကိုလည်း ကြည့်ကြည့်ပါ။
ရပ်ကွက်သာရေးနာရေးတောင် စိတ်မဝင်စားဖူးပဲနဲ့ ….
ကိုယ့်ရပ်ကွက်က ကလေးမလေးတွေကို နှမချင်း စာနာ မစောင့်ရှောက်ဖူးပဲ
ခုမှ အမျိုးစောင့် ကိစ္စတွေ ထအော်နေတာ အများသားကလား::
ကိုယ့်ဘာသာက ငါးပါးသီလ ဆိုတာတောင် ကိုယ်တိုင် မလုံပဲနဲ့ သူများဘာသာကို ပုတ်ခတ်၊ လက်ညှိုးတွေ ထိုးနေလိုက်ကြသေးတယ်။
ဘာသာခြားနဲ့ ယူသွားတာကို ၂ ပြားမတန်အောင်ပြောနေတဲ့ အကောင်များ ဟို အတန်းမှာ ကိုယ့်ဘာသာတူ လူမျိုးတူ အသစ်လေးဟေ့ ဆိုရင် အလိုမတူတာတောင် အကြမ်းဖက်နိုင်မဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့သူတွေ အများကြီးမို့ ဘယ် “တာ” က မလုံတာလဲဆိုတာလည်း ပြန်စဉ်းစားရပါဦးမယ်။
လူမျိုးခြားကိစ္စ ဘာသာခြား ကိစ္စ အရင်ပြောရရင် …..
လူမျိုးခြားကို ယူသင့်၊ မယူသင့် ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပိုင်းခြားတတ်တဲ့ စိတ်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။
ဒါကို ဆဲဆိုပြီး တားလို့ မရသလို ဥပဒေ ဆိုတာကြီးနဲ့ရော ကိုင်လို့ရမယ်ထင်နေသလားမသိ။
ဘာလို့ ဆို ခု တည်ဆဲ ဥပဒေနဲ့ကို မြန်မာစကားမပြောတတ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားကိုင်ခွင့်ရှိသူတွေ အများကြီးပါ။။
ခေါင်ကို အရင် မပြင်ပဲ ဘာမှလုပ်လို့မရ။
ဘာသာခြားကိုကြောက်နေရတယ်ဆိုလဲ ကိုယ့်အမ ကိုယ့်နှမ၊ ကိုယ့်လက်လှမ်းမှီရာကိုပဲ စောင့်ရှောတ် ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်လို့ ထင်တာပဲ။
ခုက စိတ်ဓာတ်တွေ ဖွံ့ဖြိုးအောင် အရင်လုပ်ပေးရမဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ဘာလို့ ဒါတွေကို လုပ်နေလည်းမသိ။
နောက်ပြီး လှည့်ကွက်တိုင်းမှာ ဝင်ဝင်သွားတဲ့ ကိုယ်တွေ ဉာဏ်ရည်ကိုလည်း ဆန်းစစ်ဖို့လိုပြီ။
ခုက ဘာသာရေးနဲ့ နွယ်ပြီး လူမျိုးရေးပါ အပါ အပိုင်းပိုင်းခွဲနေတဲ့ ကာလမှာလည်း အပိုင်းပိုင်းကွဲနေကြပါပြီ။
မှိုင်းတိုက်ရသိပ်လွယ်သော ကျနော်တို့ တတွေပါဗျာ။
မျှားခေါ်ရာနောက် “တို့လူလေးများ ဆိုသလေ” ဆိုတာနဲ့ လိုက်ကြတာပါ။
ကိုယ်ပိုင် ဦးနှောက်နဲ့ မစဉ်းစားပဲ ဖဘ မှာ အမုန်းစိတ်အခြေခံပြီး ရှယ်ကြတာ ကြည့်မကောင်းတော့ပါ။
ပြီးတော့ အဲဒီ သီတင်း အမှားအမှန် ကိုယ်လည်း တာဝန်မယူနိုင်၊ တာဝန်ယူနိုင်သူလည်းမရှိ။
အမျိုးစောင့် ဥပဒေ ဆိုတာလေးကို အာကျယ်ပါကျယ်မထောက်ခံခင်..
ကိုယ့်နဲ့ အယူအဆမတူသူကို ဆဲဆိုတတ်တဲ့ ပါးစပ်လေးပိတ်..
မိန်းကလေးမြင်ရင် လက်လွတ်စပယ် သားပြောမယားပြော ပြောတတ်တဲ့ ပါးစပ်လေးတွေ ခဏလောက် ပိတ်နိုင်ရင် ကို မဆိုးဘူးပဲ။
ခေါင်ကမလုံ၊ အခြေကမခိုင်ပဲနဲ့ အလှမ်းကျယ် အလယ်လတ် ကိစ္စတွေမို့ ဒီလောက်ပဲ ပြောချင်ပါတယ် အမရယ်။
ရိုင်းသွားတာ လွန်သွားတာပါ ရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။
ကျမ ရွဲ့ ပြော ထား တာ လည်း အဲ ဒါပဲ။
”အဲဒီ ဥ ပဒေ များ ပြ ဌာန်း ပြီး သွား ရင် ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံ ချက် တစ် စောင် ဘယ် နှစ် ပုန်း ပေါက်ဈေး ရှိတယ် ဆိုပြီး ကိုင် ရတဲ့ သူတွေ တော့ ထော ကြော ပဲ။”
ဘယ်လောက် အလုပ် မဟုတ် လိုက် သလဲ လို့ ။
မရိုင်းဘူး နော။ မှန်လွန်း လို့ အနာ ပေါ် ဆား ပတ် သလို ဆက်ဆက် ခါ အောင် နာသွား ကြ မှာတော့ သေချာတယ်။
မိန်း ကလေး တွေ များ ဒီလို အမြင် မျိုး ချရေး လိုက်ပြီး ဆို အယုတ္တ အနတ္တ မျိုး စုံ ပြောပြီး ကုလား မယား လုပ် လိုက် ကြ တာ ပဲ။ ဒီ လောက် ထိရိုင်း ရိုင်း စိုင်း စိုင်း အမျိုး ကို ချစ် ပြ နေရင် အဲဒီ အမျိုး ဖြစ်ရတဲ့ ကိုယ့် ကိုယ် ကို တော်တော် ရှက် လာ မိတယ်။မိန်း ကလေး မှာ ကိုယ့် အမြင် ကို လွတ်လွတ် လပ်လပ် ချရေး ဖို့ တောင် လက် တွန့် နေရတဲ့ အဖြစ်။
”ကျနော် လည်း ပြောရင်းနဲ့ ဘာသာခြား ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ သူတို့ ပါးစပ်ထဲ ရပြီးပြီလည်းတော့မသိ။”
ဒီ လိုများများ ထောက်ပြ မှ ပဲ သာသနာ အရှည် တည် ဖို့ လုပ် နေပါ တယ် ဆိုပြီး သာသနာနဲ့ မစပ်တာ လုပ်နေတဲ့ သူတွေ သိ လာ မှာပေါ့။…. carry on ခိုင်ဇာ.
သေချာတာတော့ နောက်က အချက် ပဲ။
အဲဒီဥပဒေနဲ့ ပက်သက်ပြီး အခုတလော သတင်းတွေ ဟိုပြောဒီပြောတွေ ကြားနေရတာပါဘဲလေ။
အဲလိုကြားရတော့ တစ်ခုဘဲစဉ်းစားမိတယ်“မူဘောင်လုပ်တာလား ဆူအောင်လုပ်တာလား´´ အဲဒါဘဲဗျာ။
ရေးသားသူရော ဝေဖန်ကြသူတွေရော အားလုံးကောင်းကြပါတယ်၊ ခု ဒီဂယက်က တော်တော်လေးကိုကြီးထွားနေပြီ၊(အပြင်မှာတော့ ထင်သလောက်မဟုတ်)ရေးသာကသူ့အမြင်သူ့ခံစားတွေသူ့တွေ့မြင်ခဲ့တာတွေကို အလိုမကျခြင်းဒေါသတွေနှင့်ပေါင်းစပ်နေတယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ အမှန်တော့ ဥပဒေပြဌာန်းတယ်ဆိုတာလူတွေကိစ္စပါ၊မှန်ပါ၏။ လူတွေပြဌာန်းတဲ့ဥပဒေဟာလောကီရေးရာမှာသုံးတဲ့စည်းတစ်ခုလို့မြင်မိပါတယ်။ ရဟန်းကိစ္စ၊ရဟန်းဥပဒေသဆိုတာ ဘုရားရှင်ပြဌာန်းခဲ့တာပါ။ ခုကိစ္စမှာ လူတွေပြဌာန်းရမည့်ကိစ္စတွေပါ၊ဒါဆိုရဟန်းတွေကဘာလို့လုပ်နေတာလဲလို့မေးစရာရှိနေပါတယ်။ ဒါကရိုးရှင်းလေးတွေးကြည့်ရအောင် ရဟန်းဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပါ။ များသောအားဖြင့်လူတွေမြင်ကြတာဟာ ရဟန်းဆိုတာ စာပဲလုပ်သင့်တယ်။ တရားပဲအားထုတ်သင့်တယ်လို့မြင်နေကြတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ အဲသည်လိုမဟုတ်ပါဘူး။
[တစ်ခုသောညချမ်းအချိန်အခါတွင် မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ရှင်မဟာမောဂ္ဂလန်နှင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်တို့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးတော်မူသည်။
” ချစ်သားတို့ ငါဘုရား ပရိနိဗ္ဗန်စံလွန်သော် သင်တို့မည်သို့ပြုကြမည်နည်း ”
” မြတ်စွာဘုရားရှင်မရှိသည့်နောက်..တောရပ်မှီကာ ဈာန်ဝင်စားရင်း အေးချမ်းစွာ နေတော့မည်ဟုလျောက်၏ ”
” မြတ်စွာဘုရားရှင်မရှိသည့်အခါ ဘုရားရှင်ကိုယ်စား သံဃာအပေါင်းကိုဦးဆောင်ပြီး သာသနာအကျိုး လူအများအကျိုး ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါမည် ” ဟုအသီးသီးလျောက်တင်ကြလေသည်။ြ မတ်စွာဘုရားရှင်သည်ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏အဖြေကို ပယ်တော်မူပြီး ရှင်မဟာမောဂ္ဂလန်ကို ချီးမွမ်းတော်မူ၏။
မြတ်စွာဘုရားရှင်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း တရားချည်းကျင့်နေရမည် ရင်ထဲတရားရှိရင်ပြီးပြီ
ဟုမိန့်တော်မမူခဲ့ပါ. သာသနာတည်တံ့အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ချီးမွမ်းတော်မူခဲ့ပါသည်….
ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သိနိုင်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ခေါင်းရှောင်မဟုတ်ဘူး၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကိုလုပ်နေကြတာပါ။ ကြိုက်တာ မကြိုက်မပြောလိုပါ။ ယခု ဖြစ်နေကြတာတွေအားလုံးအသိပါ၊ ဒီကိစ္စတွေကိုဘယ်သူပြေပြေလည်လည်ဖြေရှင်းလဲ၊ လူတွေလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပါ၊ လူတွေပြေပြေလည်လည်ဖြေရှင်းပေးတာဘယ်သူတွေ့ဖူးလဲ၊ နောက်ဆုံးအပြစ်မရှိတဲ့သူတွေသာခံစားနေရတာမဟုတ်လား။ ခုချိန်ထိလောင်နေဆဲပါ။ ဒါဟာ ဘာသာရေးအတိအကျမဟုတ်သလို၊ လူမှုရေးအတိကျလည်းမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ခေါင်းဆောင်းတွေကစဉ်းစားဖို့လိုအပ်နေပြီ၊(ကိုယ့်ထမင်းကိုစား၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်၊ဒို့နှင့်မဆိုင်၊ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်၊သူတပါးလုပ်တော့လည်းအပြစ်ပြောတဲ့သူတွေ၊) ကိုယ်မစွမ်းနိူင်လို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းသူတပါးကိုအပြစ်မပြောပါနဲ့၊ ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်၊လုပ်သူကိုအပြစ်ပြောတယ်ဆိုတာသဘာဝမကျလှပါ၊ အဓိကပြောချင်တာကသေချာစဉ်းစားပါ၊လုပ်နေတာတွေက တကယ့်တကယ်မှာဆိုးကျိုးပေးမှာလား၊ ဆိုးကျိုးပေးမည့်ဟာဆိုရင်ရှောင်ကြဉ်လိုက်ပေါ့၊ ခုတော့ ထစ်ကနဲဆို ပြောဖို့ချည်းချောင်းနေကြတာမသင့်လျော်ပါ၊ ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းက ဘယ်အတိုင်းတာရောက်နေလဲဆိုတာသေချာစဉ်းစားပါ၊ တဖက်က လူသားမဟုတ်ပါ၊ ရဟန်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ၊ သူရွက်ထားရတဲ့ ငရဲအိုးကို ကိုယ့်ဘက်မှာပြောင်းမယူမိပါစေနဲ့။
အလှူ ရှင်တွေ ရဲ့ ယုံ ကြည် မှု ကို အလွဲ သုံး စား လုပ်လို့ မာတုကာမ တွေ ဖျာရောင်း တဲ့ နောက် လိုက် လို့ လူထွတ် တဲ့ ဘုန်းဘုန်း တွေ ကို တော့ ကုန်းကုန်း တွေ လုပ် ပစ် ။
လုပ်ရပ်ကိုဝေဖန်တာ လက်ခံလို့ရတယ်..။ ဘုန်းကြီးကိုဆဲတာတော့ လက်မခံဘူး..။ ရဟန်းဆိုတာ ပါရာဇိက မကျမချင်း ရဟန်းပါဘဲ..။ သင်္ကန်းချွတ်ပြီးထောင်ချထားလည်း ရဟန်းရဲ့စိတ်မှာ လူဝတ်လဲချင်စိတ်မရှိရင် ရဟန်းအဖြစ်မှ လျှောကျခြင်းမရှိပါဘူး..။ လူဝတ်လဲခါနီး သိက္ခာချရင်တောင် ရဟန်းအဖြစ်မှ လူဝတ်လဲချင်ပါလား သုံးခါတိတိမေးပါတယ်..။ ကာယကံရှင်ဆန္ဒပါမှ သိက္ခာချခြင်းအမှု ပြီးမြောက်ပါတယ်..။
ရဟန်းတစ်ပါးကို ကိုယ်နှုတ်စိတ်နဲ့ပစ်မှားတာတောင် ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ လွန်လှပါပြီ..။ ရဟန်းချင်းကို ရန်တိုက်ပေးတာမျိုးကတော့ သံဃာသင်းခွဲခြင်းမည်ပါတယ်..။ သံဃာသင်းခွဲတဲ့ အပြစ်ဟာ ဘယ်လောက်ကြီးလေးတယ် ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင် သိထားသင့်ပါတယ်..။
နောက်တစ်ခုအမှတ်လွဲနေကြတာရှိပါတယ်..။ မနေ့ကတော့ တစ်ယောက်ကရေးထားတာ တွေ့တယ်..။ ဆရာတော်ဦးဝီရသူကို ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ်တောင် အလွတ်ရွတ်နိုင်လို့လားလို့ ရေးထားတာမှာ အောက်ကနေ အများကြီးထောက်ခံထားတာတွေ့ပါတယ်..။ ဦးဝီရသူဟာ အဘိဝံသ ဘွဲ့ရထားသူတစ်ယောက်ပါ..။ ဒါကြောင့်လည်း မစိုးရိမ်မှာ ကျောင်းတစ်ခုရဲ့ ကျောင်းထိုင်နေရာ ပေးထားခံရတာဖြစ်ပါတယ်..။ အဘိဝံသဘွဲ့ဟာ ဘယ်လောက်အပတ်တကုတ် အားထုတ်ရတယ်ဆိုတာ ပိဋကတ်စာပေ လေ့လာဖူးသူတိုင်းသိပါတယ်..။ (အန္ဓအတွေးတွေနဲ့ အဘိဝံသတစ်ပါးကို ပြောတာ အလွန်တရာမိုက်မဲတယ်ဆိုတာလေး ပြောပြတာပါ)
ပြောနေတဲ့သူတွေက ဝိနည်းမညီဘူးပြောတယ်..။ ဝိနည်းညီခြင်းမညီခြင်းဆိုတာမှာ ရဟန္တာဖြစ်ပြီး သားတောင်မှ အနုစားအာပတ်သင့်တာမျိုးတွေ အာပတ်ဖြေရတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်..။ ဝိနည်း မညီဘူးပြောတဲ့သူတွေကကော ဝိနည်း (၅) ကျမ်းမှာ ဘယ်ကျမ်းတစ်ကျမ်းကိုများ အစအဆုံး လေ့လာဖူး ဖတ်ဖူးပါသလဲ..။ (ဝိနည်းတော်မှာပါတာက ကုဋီတက်ပြီး ရေခွက်ကို ပက်လက် ထားခဲ့ရင်တောင် နောက်တပါးတက်လာတဲ့အချိန် ဒီထဲကရေလက်ကျန်အပေါ်မှာ သံသယဝင်သွား ရင်တောင် ရေခွက်ကို ပက်လက်ထားခဲ့တဲ့ ရဟန်းမှာ အသေးစားအာပတ်သင့်ပါတယ်)
မနက်က သူငယ်ချင်းပြည်စုံမြတ်မိုး တင်ထားတာလေးလည်း ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်..
[[[[[[[[တစ်ခုသောညချမ်းအချိန်အခါတွင် မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ရှင်မဟာမောဂ္ဂလန်နှင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်တို့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးတော်မူသည်။
ထို့ကြောင့် ယခုအချိန်ခါတွင် အကြမ်းဖက်ခြင်းလုံးဝမရှိပဲ သာသနာတည်တံ့အောင် အမျိုးဘာသာ
သာသနာအကျိုးဆောင်ရွက်နေသူ ရဟန်း ရှင် လူ အားလုံးကိုရှင်မဟာမောဂ္ဂလန် စိတ်ထားရှိသူများ ဟု ဂုဏ်ပြုလိုပါသည်) ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီး အေးအေးမနေကြဘူး၊ ဘုရားဟောနဲ့အညီမနေကြဘူး၊ ဘုရားရှိပြီးတာပဲဆိုသူများသတိချပ်စရာပါ။]]]]]]]]]]
ဘုရားရှင်ဟာ ကိုယ့်အကျိုးအတွက် ဘုရားဖြစ်အောင်အရင့်ကျင့် ပါရမီဖြည့်ပြီးမှ သူတပါးအကျိုးကို ဆောင်ရွက်တာပါ..။ ကိုယ့်မှာ ပြည့်မနေဘဲ တခြားသူကိုလိုက်ဖြည့်ပေးလို့မရပါဘူး..။ ကိုယ့်အတွက်ပြည့်ပြီးရင်လည်း သူတပါးကို ဖြည့်ပေးတဲ့ ပရဟိတစိတ်ဓာတ် ဖြစ်စေချင်တာပါ..။ ရှင်မဟာမောဂ္ဂလန်က သူတပါးအကျိုးစီးပွားအတွက် သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာကို မြတ်စွာဘုရား ချီးမွမ်းရခြင်းက အဲဒါကြောင့်ပါ..။
အချင်းချင်းနှုတ်လှန်ထိုးပြီး သံဃာတော်တွေကို ဆဲဆိုနေတာကလည်း ဘာသာခြားတွေအမြင်မှာ ဒီလူတွေမစည်းလုံးဘူးလို့မြင်စရာရှိပါတယ် (ကျွန်တော်ထင်တာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို တိုက်ခိုက်ချင်တဲ့သူတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာအယောင်ဆောင်ပြီး အထင်လွဲအောင် ဆဲဆိုသောင်းကျန်း နေတာလို့ ယူဆမိပါတယ်) ..။
ဘုရားရှင်သင်ပေးခဲ့တာ ဗြဟ္မဝိဟာရ တရားပါ..။ အဓမ္မမဟုတ်ပါဘူး။ အခုလက်ရှိမှာ ဒေါသကြောင့် ဆဲမိဆိုမိသူတွေလည်း မိမိကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားရဲ့ Image မကျဆင်းရေးအတွက် ဆဲဆိုခြင်းမပြုကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်..။ မိမိကိုယ်မိမိ ဗြဟ္မစာရဖြစ်ချင်တာလား အဓမ္မဝါဒီဖြစ်ချင်တာလား ကွဲကွဲပြားပြားသိရင်တော့ တစ်ဖက်ကိုပဲ ရွေးလိုက်ပါ..။
တရားရုံးမှာ သက်သေထွက်ချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်က သက်သေက ကိုယ့်ကိုဆန့်ကျင် ထွက်ဆိုရင် ပိုပြီးထိခိုက်နစ်နာပါတယ်..။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမယုံကြည်လို့ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကို ဆန့်ကျင်ချင်လို့၊ ဘုရားသားတော်တွေကို ဆဲဆိုရိုင်းပျချင်လို့ ဆိုရင်တော့ ဘာသာမဲ့ဖြစ်စေ၊ အခြားဘာသာဖြစ်စေ လွတ်လပ်စွာ ခံယူနိုင်ကြပါကြောင်းနဲ့ ဘာသာပြောင်းလို့ လည်း ဘယ်သူမှ အတင်းအဓမ္မ ပြန်ပြောင်းခိုင်းကြမှာ မဟုတ်ပါကြောင်း..။
အဲဒီအပေါ်က.. လူသားဖြစ်တည်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့.. လူသားအခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်းရဲ့.. ပထမအပိုဒ်လေးတခု.. အဲဒါလေးလိုက်နာနိုင်ကြရင်.. ဘုန်းကြီးလည်း.. နိုင်ငံရေးလုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်..။ ရှိရပါမယ်..။
ဒါပေမယ့်… ဘုရားသားဆိုတဲ့အထူးခွင့်အရေးမရ/မယူရပဲ… လူတိုင်းတွေနဲ့တန်းတူဖြစ်ရမယ်..။
မမိုချို ရဲ့ကျလိကျလိ ကို ဖတ်ပြီး..
ကျွန်တော်လည်း.. ကျလိကျလိ ဖြစ်သွားပါတယ် ။
ပုကျိ ပုကျိ လုပ်တယ် ဖြစ်နေမယ် ။
ဒီတော့… ကုတ်ကွ ကုတ်ကွ နဲ့ ပဲ…..ဖတ်ရှု…
အလက်ဆင်း ရေ ဒီနေ့ တင်ထားတဲ့ နောက် တစ်ပုဒ် ထပ် ဖတ် လိုက် ဦးနော်။
အဲ့ဒုံးက မိုချိုဂလေး ဂိုက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ကန်တော်ဂလေး မဆလာစက်နားက အယာတိုလာ မာမွတ်ကြောင်ဆိုဒါ ဦးကြောင်ပါဗဲကွယ်… မင်ဂါဗာချာမ.. ကျေးဂျူးတင်ဗာဒယ်ချာမ..
ကွန်မန့်အတွက် ကျေး ဇူး တင်ပါတယ်။ ကျမ ရဲ့ ပိုစ့် မှာ ဒေါသ အငွေ့ အနည်း ငယ် ပါတာမငြင်း ပါဘူး။ ခုတလော အင်တာနက် သုံးတိုင်း ဖြစ် နေကြ မို့ လို့ တတ်နိုင် သမျှ ထိန်း ချုပ် နေရပါတယ်။ အသေး စိတ် ကို ပိုစ့် အဖြစ် ထပ် တင် ထား တဲ့ အတွက် ဆက် ဖတ် ကြည့် စေချင်ပါတယ်။
အဲလောက်ထိ ဝေဖန် ရဲ ဘူးတော့။ ခု တောင် စွဲ ချက် တင်ထား တဲ့ ပြစ်ချက်တွေ တော်တော် ကြီးနေပြီ။
သိပြီသိပြီ ။ဘောင်းဘီ ဖင်ကြပ်လေး ၀တ်ပြီး အာဘား အာဘား နဲ့ အော်အော် ပြီး ကနေ တတ်တဲ့ ရှရွက်ခန်း လေး က ဦးကြောင် ကိုး ။ခုမှ သိတော့ တယ်။
မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတွေ ဘာသာပြောင်းပြေးအောင် လုပ်နေသလားမသိ။ နဂိုကမှ ဘာသာခြားယူပြီး ဘာသာပြောင်းချင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ဥပဒေကြမ်းထုတ်ပြီး တခြားဘက်ရောက်အောင် တွန်းပို့နေသလိုဘဲ…..မမိုချိုရေ…..မပြောချင်တော့ဘူး
(ဒဂယ်တော့ အတော်လေး ပြောချင်နေတာ …ေိေိ)
နောက်ဆို မြန်မာယောင်္ကျားတယောက် လျှင် မိန်းမလေးယောက် တရားဝင်ယူခွင့်ရှိသည် ဆိုတဲ့ ဥပဒေသစ် ပေါ်လာနေအုံးမယ်…….
အမျိုးစောင့် ဥပဒေခေါ်မဲ့အစား…မြန်မာအမျိုးသမီးများ နှိပ်ကွပ်ရေး ဥပဒေလို့ ပြောင်းခေါ်ချင်ပါရဲ့…
မသိရင်ဘဲ မြန်မာအမျိုးသမီးထု တရပ်လုံးသည် လင်ယူပက်စက်လွန်းသောကြောင့် ဥပဒေပြဌာန်းပြီး ထိန်းရတဲ့အဆင့်ရောက်နေဘီလို့ ကြော်ငြာသလိုဘဲ….
ကိုယ့်ပေါင်ကို လှန်ထောင်းနေမှန်းရော သတိထားမိသေးရဲ့လား မပြောတတ်
ဒီဥပဒေသာ အတည်ဖြစ်ကြည့် နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာမ ဟေ့ဆိုရင် ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အစွန်းရောက်တဲ့ နိုင်ငံကလူတွေလို သဘောထားပြီး အဖက်မတန်သလို ဆက်ဆံခံရတော့မလားတွေးမိတယ်….ဒွတ်ခ
ကန့် ကွက် တဲ့ မိန်း ကလေး တိုင်းကို ကုလား မယား ၊ ဘာညာ နဲ့ ရင့် သီးနေကြတော့ အပျိုလေးတွေ ခမျာ စိတ်ထဲ သဘော မတူတာတောင် ရဲရဲ မပြောရဲတဲ့ အဖြစ်။ အွန် လိုင်း ပေါ် ရိုင်း ဆိုင်း နေလိုက် ကြတာများ ….ဒီလိုနည်း နဲ့ ပဲ အမျိုး၊ ဘာသာ ကို စောင့် ရှောက်ကြနေ လို့ တိုး တတ် နေအုံး မယ်။
ကိုဇွဲမာန်(အင်းဝ) ပြောတာ မှန်သင့်သလောက်မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ လိုမှာ သင်္ကန်းရုံ လိုက်တာ နဲ့ ရဟန်း လို့ သတ်မှတ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒါဟာလဲ အဆင်တန်ဆာ သဘောဖြစ်နေပါတယ်။
အဆင်တန်ဆာ ကိုတော့ မကန်တော့ နိုင်ပါဘူး။
ကျွန်မ ကိုယ်ပိုင် အတွေး အရ အတွင်းစိတ် အမှန်ကို ဘဲ ကြည်ညို မှာပါ။
အတွင်းစိတ်မှန်ပြီး အတ္တတွေ ဖယ်နိုင်ဖို့ တရားသဘော ပြနိုင်သူ ဆိုရင် သင်္ကန်းရုံမထားလဲ ဘယ်သူ့ ကိုမဆို ကျွန်မ ထိုင်ပြီးကန်တော့နိုင်ပါတယ်။
အတ္တတွေရှေ့ထားနေတာ မြင်ရရင်တော့ သင်္ကန်းရုံထားထား ၊ ဘွဲ့တံဆိပ် တွေ တပ်ထားထား ကျွန်မ မကန်တော့ ပါဘူး။
သင်္ကန်းရုံ ထားတာ ကို မကန်တော့ လို့ ငရဲရောက်မယ် ဆိုလဲ မတတ်နိုင်ဘူး။
အခုဟာက တလွဲ ချည်းတွေ ဘဲ။
အစ္စလာမ်ဘာသာ ကို တိုက်ဖို့ အစ္စလာမ်ဘာသာ အတိုင်း ခိုးချ နေတော့ တာဘဲ။
တစ်ခုခု တော့ မှားနေတာအမှန်ဘဲ။
ကျွန်မ ဘယ်သူ့ ကိုမှ မဆဲရေးပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒီဘုန်းကြီး မဟုတ်တာ ပြောနေ လုပ်နေ တာတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တိုင်း စည်းလုံး မှု ရဖို့ လိုက် လုပ် ရမယ် ဆိုရင်တော့
ကျွန်မ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အေးသီးရစ် (ဘာသာမဲ့) လို့ ဘဲ နာမည်ခံပါမယ်။
အတ္တတွေ များလွန်းတဲ့ ဘာသာဝင် တော့ မဖြစ်ချင်ပါဘူး။
Air pollution ပြသနာတွေ နဲ့ Take Care!!!
သံဃာနဲ့ ပတ်သတ် တဲ့ ခံယူချက် တစ် ထပ်တည်း ကျလို့ BC ပါ။
အတ္တတွေ များလွန်းတဲ့ ဘာသာဝင် ဖြစ်မှာစိုး လို့ တော့ ရခဲလှတဲ့ အဖိုးတန် ဘာသာ ကို မစွန့် လွှတ်လိုက် ပါနဲ့ နော။ အတ္တများ၊ အစွန်း ရောက်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အုပ်စု ကို ပဲ စွန့် လွှတ် လိုက်ပါ။ တကယ် ကြည်ညို စရာကောင်း ပြီး ငြိမ်းချမ်း တဲ့ တရား စစ် တရား မှန် တွေ ကို ဟောကြား လမ်း ညွှန်ပေး နိုင် တဲ့ ဆရာတော် ကြီးတွေလည်း ရှိပါသေး တယ်။
အရီး ရေ…. စိတ်ထဲ ခံ ပြင်း လွန်းလို့ တမင် ပြော မှန်း တော့ သိပါတယ်။
အဲဒီဘုန်းကြီးတွေအရင်လုပ်ရမှာက အဲဒီ မျိုးစောင့်ဥပဒေမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ သံဃာတွေ မွန်းလွဲ ညစာ မစားရေး၊ ပရိယတ် ပရိပတ်လုပ်ရေး။ အဲဒါတွေအရင်လုပ်ရမှာ။ ဘယ့်နှယ့် အခုကြည့်ကြည့်နေတာ။ ဘုန်းကြီးတွေ သင်္ကန်းတဖားဖားနဲ့ ညစာထွက်စားလားစားရဲ့။ လူငယ်ယောင်္ကျားလေးတွေလို လုပ်နေလားလုပ်နေရဲ့။ တကယ်ကိုသင်္ကန်းအရေခြုံနေတာတွေကို သာသနာတော်စောင့်ဥပဒေဆိုပီး အရင်ထုပ်ရမှာ။ သာသနာတော်သန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်နေပြီ။ သံဃနာယကဆရာတော်ကြီးတွေကလဲ ဘာလို့နှာစီးနေလဲမသိဘူး။ ရွှေည၀ါတို့ဘာတို့တုန်းက ချက်ချင်းနှင်ထုပ်အရေးယူပြီး အခုဒီ ဦးဝီရသူတို့ သောင်းကျန်းချင်တိုင်းသောင်းကျန်းနေတာကို မျက်ကွယ်ပြုနေကြတယ်။ သာသနာရေးဝန်ကြီးဆီစာရေးတိုင်သင့်ပြီထင်တာပဲ။